August 2017 | Language Century Language Century
အရောင်များ - ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ။
10:08 PM C-Video , Chinese
အရောင်တွေရဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေကို သင် တရုတ်လို ပြောတတ်ပါသလား။ ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးက သင့်ကို အထောက်အကူပြုပေးပါလိမ့်မယ်။
File Name - အရောင်များ
File Type - ဝေါဟာရ
File Size - 9.91Mb
Lecturer - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် (Admin- Chinese for all)
YouTube တွင် ကြည့်ရန် - Link
Colour - COLOUR - colour - Color - COLOR - color - yanse - yan se - yan2 se4 - 颜色
ရေချိုးခန်းမှာ - ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ။
7:51 AM C-Video , Chinese
ရေချိုးခန်းထဲမှာ သုံးတဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ အခေါ်အဝေါ် ဝေါဟာရတွေနဲ့ အခြားသိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတတွေကို ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးနဲ့အတူ လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါပြီ။
File Name - ရေချိုးခန်းမှာ
File Size - 13.30 Mb
7:31 AM C-Dialogue , Chinese
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကတော့ အကြိုက်ချင်း မတူကြဘူးပေါ့နော်။ မိမိ စားချင်တာကို မှာစားလို့ရပါတယ်။
☞ Nǐ xiànzài xiǎng gàn shénme?
☞ နီ ရှန့်ဇိုက်z ရှန်(င်)ကန့်ရှဲhမဲာ့
☞ မင်း အခု ဘာလုပ်ချင်လဲ။
☞ Wǒ è le, wǒ xiǎng qù chī diǎn dōngxi.
☞ ဝေါ်အဲာ့လဲာ့ ဝေါရှန်(င်)ချွိ ချီးhတျန်တုံး(င်)ရှိ
☞ ငါ ဗိုက်ဆာပြီ၊ ငါ တခုခု သွားစားချင်တယ်။
☞ Nǐ xiǎng qù nǎr chī?
☞ မင်း ဘယ်သွားပြီး စားချင်တာလဲ။
☞ Wǒ xiǎng qù yì jiā Yìdàlì cāntīng.
☞ ဝေါရှန်(င်)ချွိ ယိကျား ယိတာ့လိဆန်းထင်း(င်)
☞ ငါ အီတလီစားသောက်ဆိုင် သွားချင်တယ်။
☞ Nǐ xǐhuan chī shénmeyàng de yìdàlì cài?
☞ နီးရှီဟွမ်းချီးh ရှဲhမဲာ့ယန့်(င်)တဲ့ ယိတာ့လိဆိုက်
☞ မင်းက ဘယ်လိုမျိုး အီတလီအစားအစာကို ကြိုက်လဲ။
☞ Wǒ xǐhuan yìdàlì miàn, nǐ xǐhuan ma?
☞ ဝေါရှီဟွမ်း ယိတာ့လိမြန့် နီးရှီဟွမ်းမား
☞ ငါက အီတလီခေါက်ဆွဲ ကြိုက်တယ်၊ မင်း ကြိုက်လား။
☞ Bù, bù xǐhuan, dànshì wǒ xǐhuan bǐsàbǐng.
☞ ပု ပုရှီဟွမ်း တန့်ရှစ်h ဝေါရှီဟွမ်း ပီစာ့ပျင်(င်)
☞ ဟင့်အင်း၊ မကြိုက်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ငါက ပီဇာကြိုက်တယ်။
တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျကတော့ အကွိုကျခငျြး မတူကွဘူးပေါ့နျော။ မိမိ စားခငျြတာကို မှာစားလို့ရပါတယျ။
☞ နီ ရှနျ့ဇိုကျz ရှနျ(ငျ)ကနျ့ရှဲhမဲာ့
☞ မငျး အခု ဘာလုပျခငျြလဲ။
☞ ဝျေါအဲာ့လဲာ့ ဝေါရှနျ(ငျ)ခြှိ ခြီးhတနျြတုံး(ငျ)ရှိ
☞ ငါ ဗိုကျဆာပွီ၊ ငါ တခုခု သှားစားခငျြတယျ။
☞ မငျး ဘယျသှားပွီး စားခငျြတာလဲ။
☞ ဝေါရှနျ(ငျ)ခြှိ ယိကြား ယိတာ့လိဆနျးထငျး(ငျ)
☞ ငါ အီတလီစားသောကျဆိုငျ သှားခငျြတယျ။
☞ နီးရှီဟှမျးခြီးh ရှဲhမဲာ့ယနျ့(ငျ)တဲ့ ယိတာ့လိဆိုကျ
☞ မငျးက ဘယျလိုမြိုး အီတလီအစားအစာကို ကွိုကျလဲ။
☞ ဝေါရှီဟှမျး ယိတာ့လိမွနျ့ နီးရှီဟှမျးမား
☞ ငါက အီတလီခေါကျဆှဲ ကွိုကျတယျ၊ မငျး ကွိုကျလား။
☞ ပု ပုရှီဟှမျး တနျ့ရှဈh ဝေါရှီဟှမျး ပီစာ့ပငျြ(ငျ)
☞ ဟငျ့အငျး၊ မကွိုကျဘူး၊ ဒါပမေယျ့ ငါက ပီဇာကွိုကျတယျ။
ကျေးဇူးပြု၍ ပတ်စ်ပို့လေး ထုတ်ပြပါ။
7:24 AM C-Dialogue , Chinese
လေဆိပ်မှာ ပတ်စ်ပို့၊ လေယာဉ်လက်မှတ်နဲ့ ဝန်စည်စလှယ် စစ်ဆေးတာတွေကို စကားပုံပြောပုံစံ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Nín hǎo! Qǐng chūshì nín de hùzhào hé jīpiào.
☞ နင်းဟောင် ချင်(င်)ချူးhရှစ်h နင်တဲ့ဟုကျောက်hဟဲယ် ကျီးဖျောက်
☞ မင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ခင်ဗျားရဲ့ ပတ်စ်ပို့နဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်လေး ပြပါခင်ဗျာ။
☞ Nín hǎo! Gěi! Wǒ kěyǐ yào yíge kàochuāng de zuòwèi ma?
☞ နင်းဟောင် ကေ ဝေါ်ခဲယ်းယီယောက် ယီကဲာ့ ခေါက်ချွမ်းh(င်)တဲ့ ဇော့zဝေ့မား
☞ မင်္ဂလာပါ။ ဒီမှာပါခင်ဗျ။ ကျွန်တော် ပြတင်းပေါက်နားကပ်လျက်ခုံနေရာ ရနိုင်မလား။
☞ Méi wèntí. Qǐng shāoděng... bù hǎo yìsi, méiyǒu kàochuāng de zuòwèi le.
☞ မေဝဲင့်ထီ ချင်(င်)ရှောင်းhတဲင်(င်) ပုဟောင်ယိစီး မေးယို ခေါက်ချွမ်းh(င်)တဲ့ ဇော့zဝေ့လဲာ့
☞ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ ခဏစောင့်နော်... အားနာလိုက်တာဗျာ၊ ပြတင်းပေါက်နားကပ်လျက်ခုံနေရာ မရှိတော့ဘူးဗျ။
☞ Méi guānxi. Kào guòdào yě xíng.
☞ မေကွမ်းရှိ ခေါက်ကော့တောက်တဲ့ ယယ်ရှင်(င်)
☞ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ လျှောက်လမ်းနဲ့ ကပ်လျက်ခုံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
☞ Hǎo de. Nín yǒu xíngli yào tuōyùn ma?
☞ ဟောင်တဲ့ နင်းယိုရှင်း(င်)လီ ယောက်ထောယွင့်မား
☞ ကောင်းပါပြီ။ ခင်ဗျားမှာ စစ်ဆေးခံစရာ ဝန်စည်စလှယ် ရှိပါသလား။
☞ Yǒu yí jiàn.
☞ တစ်ခု ရှိပါတယ်။
☞ Bù hǎo yìsi, nín de xíngli chāozhòng le.
☞ ပုဟောင်ယိစီး နင်တဲ့ရှင်း(င်)လီ ချောင်းhကျုံ့h(င်)လဲာ့
☞ အားနာပါတယ်၊ ခင်ဗျားရဲ့ ဝန်စည်စလှယ်က ခွင့်ပြုအလေးချိန်ထက် ပိုနေပါတယ်။
☞ Nà wǒ bǎ shū nǎ chū lái. Xiànzài kěyǐ le ma?
☞ နာ့ ဝေါပါရှူးh နာချူးhလိုင် ရှန့်ဇိုက်z ခဲယ်းယီလဲာ့မား
☞ ဒါဆို ကျွန်တော် စာအုပ်တွေကို ထုတ်ထားလိုက်ပါ့မယ်။ အခု အဆင်ပြေသွားပြီလား။
☞ Kěyǐ le. Zhè shì nín de jīpiào, hùzhào hé dēngjīpái. Dēngjī shíjiān shì liù diǎn wǔshí fēn. Dēngjīkǒu zài shíwǔ hào.
☞ ခဲယ်းယီလဲာ့ ကျဲ့hရှစ်h နင်တဲ့ကျီးဖျောက် ဟုကျောက်hဟဲယ် တဲင်း(င်)ကျီးဖိုင် တဲင်း(င်)ကျီးရှီhကျန်းရှစ်h လျို့တျန်ဝူရှီhဖဲင်းf တဲင်း(င်)ကျီးခိုဇိုက်z ရှီးhဝူဟောက်
☞ ရပါပြီ။ ဒါက ခင်ဗျားရဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်၊ ပတ်စ်ပို့နဲ့ လေယာဉ်တက်ခွင့်လက်မှတ်ပါ။ လေယာဉ်တက်ချိန်က ၆-နာရီ ၅၀-မိနစ်ပါ။ ဂိတ်ပေါက်နံပါတ်က ၁၅ ပါ။
☞ Hǎo de. Xièxie!
☞ ဟောင်တဲ့ ရှဲ့ရှဲ့
☞ ကောင်းပါပြီ။ ကျေးဇူးပါ။
☞ Zhù nín lǚtú yúkuài!
☞ ကျုhနင် လွီထူးယွီခွိုက်
☞ လမ်းခရီးတလျှောက် ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ကြေးဇူးပွု၍ ပတျဈပို့လေး ထုတျပွပါ။
လဆေိပျမှာ ပတျဈပို့၊ လယောဉျလကျမှတျနဲ့ ဝနျစညျစလှယျ စဈဆေးတာတှကေို စကားပုံပွောပုံစံ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ နငျးဟောငျ ခငျြ(ငျ)ခြူးhရှဈh နငျတဲ့ဟုကြောကျhဟဲယျ ကြီးဖြောကျ
☞ မင်ျဂလာပါ၊ ကြေးဇူးပွုပွီး ခငျဗြားရဲ့ ပတျဈပို့နဲ့ လယောဉျလကျမှတျလေး ပွပါခငျဗြာ။
☞ နငျးဟောငျ ကေ ဝျေါခဲယျးယီယောကျ ယီကဲာ့ ခေါကျခြှမျးh(ငျ)တဲ့ ဇော့zဝမေ့ား
☞ မင်ျဂလာပါ။ ဒီမှာပါခငျဗြ။ ကြှနျတျော ပွတငျးပေါကျနားကပျလကျြခုံနရော ရနိုငျမလား။
☞ မဝေဲငျ့ထီ ခငျြ(ငျ)ရှောငျးhတဲငျ(ငျ) ပုဟောငျယိစီး မေးယို ခေါကျခြှမျးh(ငျ)တဲ့ ဇော့zဝလေဲ့ာ့
☞ ပွဿနာ မရှိပါဘူး။ ခဏစောငျ့နျော... အားနာလိုကျတာဗြာ၊ ပွတငျးပေါကျနားကပျလကျြခုံနရော မရှိတော့ဘူးဗြ။
☞ မကှေမျးရှိ ခေါကျကော့တောကျတဲ့ ယယျရှငျ(ငျ)
☞ ကိစ်စမရှိပါဘူး။ လြှောကျလမျးနဲ့ ကပျလကျြခုံလညျး ဖွဈပါတယျ။
☞ ဟောငျတဲ့ နငျးယိုရှငျး(ငျ)လီ ယောကျထောယှငျ့မား
☞ ကောငျးပါပွီ။ ခငျဗြားမှာ စဈဆေးခံစရာ ဝနျစညျစလှယျ ရှိပါသလား။
☞ တဈခု ရှိပါတယျ။
☞ ပုဟောငျယိစီး နငျတဲ့ရှငျး(ငျ)လီ ခြောငျးhကြုံ့h(ငျ)လဲာ့
☞ အားနာပါတယျ၊ ခငျဗြားရဲ့ ဝနျစညျစလှယျက ခှငျ့ပွုအလေးခြိနျထကျ ပိုနပေါတယျ။
☞ နာ့ ဝေါပါရှူးh နာခြူးhလိုငျ ရှနျ့ဇိုကျz ခဲယျးယီလဲာ့မား
☞ ဒါဆို ကြှနျတျော စာအုပျတှကေို ထုတျထားလိုကျပါ့မယျ။ အခု အဆငျပွသှေားပွီလား။
☞ ခဲယျးယီလဲာ့ ကြဲ့hရှဈh နငျတဲ့ကြီးဖြောကျ ဟုကြောကျhဟဲယျ တဲငျး(ငျ)ကြီးဖိုငျ တဲငျး(ငျ)ကြီးရှီhကနျြးရှဈh လြို့တနျြဝူရှီhဖဲငျးf တဲငျး(ငျ)ကြီးခိုဇိုကျz ရှီးhဝူဟောကျ
☞ ရပါပွီ။ ဒါက ခငျဗြားရဲ့ လယောဉျလကျမှတျ၊ ပတျဈပို့နဲ့ လယောဉျတကျခှငျ့လကျမှတျပါ။ လယောဉျတကျခြိနျက ၆-နာရီ ၅၀-မိနဈပါ။ ဂိတျပေါကျနံပါတျက ၁၅ ပါ။
☞ ဟောငျတဲ့ ရှဲ့ရှဲ့
☞ ကောငျးပါပွီ။ ကြေးဇူးပါ။
☞ ကြုhနငျ လှီထူးယှီခှိုကျ
☞ လမျးခရီးတလြှောကျ ပြျောရှငျပါစေ။
7:19 AM C-Dialogue , Chinese
မိမိ သွားနေကျမဟုတ်တဲ့ နေရာစိမ်းတစ်ခုမှာ ယောင်လည်လည်မဖြစ်စေဖို့ ဒီလိုလေးတွေ မေးမြန်းတတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားသင့်ပါတယ်။
☞ Nǐ qù nǎlǐ?
☞ မင်း ဘယ်သွားမလို့လဲ။
☞ Wǒ yào qù jīchǎng, nǐ néng gàosù wǒ zěnme zǒu ma?
☞ ဝေါ်ယောက်ချွိ ကျီးချန်h(င်) နီနဲင်(င်)ကောက်စုဝေါ် ဇဲင်zမဲာ့ဇိုzမား
☞ ငါ လေဆိပ်သွားမလို့၊ ဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတာ မင်း ငါ့ကို ပြောပြနိုင်မလား။
☞ Ò, hěn bàoqiàn, wǒ yě bù zhīdào.
☞ အော့ ဟဲင်ပေါက်ချန့် ဝေါယယ်ပုကျီးhတောက်
☞ သြော်၊ ဆောရီးပါ၊ ငါလည်း မသိဘူး။
☞ Wǒ juéde wǒ kěyǐ zuò dìtiě qù jīchǎng, nǐ zhīdào dìtiězhàn zài nǎr ma?
☞ ဝေါ်ကျွယ်တဲ့ ဝေါ်ခဲယ်းယီ ဇော့zတိထျယ် ချွိကျီးချန်h(င်) နီကျီးhတောက် တိထျယ်ကျန့်h ဇိုက်zနာrမား
☞ လေဆိပ်ကို မြေအောက်ရထား စီးသွားလို့ရတယ်လို့ ငါထင်တယ်၊ မြေအောက်ရထားဘူတာ ဘယ်မှာလဲ မင်းသိလား။
☞ Dāngrán zhīdào, jiù zài nàbiān.
☞ တန်း(င်)ရန်r ကျီးhတောက် ကျို့ဇိုက်zနာ့ပြန်း
☞ သိတာပေါ့၊ ဟိုဘက်နားမှာလေ။
☞ Zài nǎr? Wǒ méi kàn dào.
☞ ဇိုက်zနာr ဝေါ်မေခန့်တောက်
☞ ဘယ်နားလဲ။ ငါ မတွေ့ဘူး။
☞ Guò mǎlù qù ba.
☞ လမ်းဖြတ်ကူးပြီး သွားလိုက်ပါ။
☞ Zhīdào le, xièxie.
☞ ကျီးhတောက်လဲာ့ ရှဲ့ရှဲ့
☞ သိပါပြီ၊ ကျေးဇူးပါ။
☞ Bú kèqì.
☞ Ò, nǐ zhīdào fùjìn nǎr yǒu cèsuǒ ma?
☞ အော့ နီကျီးhတောက် ဖုfကျင့်နာrယို ဆဲ့စော်မား
☞ ဒါနဲ့၊ ဒီအနားမှာ အိမ်သာဘယ်နားရှိလဲ မင်းသိလား။
☞ Zhèbiān jiù yǒu yí ge, zài zhè ge shāngdiàn lǐ.
☞ ကျဲ့hပြန်း ကျို့ယိုယီကဲာ့ ဇိုက်zကျဲ့hကဲာ့ ရှန်းh(င်)တျန့်လီ
☞ ဒီဘက်မှာ တစ်ခုရှိတယ်၊ ဒီကုန်တိုက်ထဲမှာပါ။
☞ Hǎo de, xièxie.
☞ ကောင်းပါပြီ၊ ကျေးဇူးပါ။
မိမိ သှားနကေမြဟုတျတဲ့ နရောစိမျးတဈခုမှာ ယောငျလညျလညျမဖွဈစဖေို့ ဒီလိုလေးတှေ မေးမွနျးတတျအောငျ လကေ့ငျြ့ထားသငျ့ပါတယျ။
☞ မငျး ဘယျသှားမလို့လဲ။
☞ ဝျေါယောကျခြှိ ကြီးခနျြh(ငျ) နီနဲငျ(ငျ)ကောကျစုဝျေါ ဇဲငျzမဲာ့ဇိုzမား
☞ ငါ လဆေိပျသှားမလို့၊ ဘယျလိုသှားရလဲဆိုတာ မငျး ငါ့ကို ပွောပွနိုငျမလား။
☞ အော့ ဟဲငျပေါကျခနျြ့ ဝေါယယျပုကြီးhတောကျ
☞ သွျော၊ ဆောရီးပါ၊ ငါလညျး မသိဘူး။
☞ ဝျေါကြှယျတဲ့ ဝျေါခဲယျးယီ ဇော့zတိထယျြ ခြှိကြီးခနျြh(ငျ) နီကြီးhတောကျ တိထယျြကနျြ့h ဇိုကျzနာrမား
☞ လဆေိပျကို မွအေောကျရထား စီးသှားလို့ရတယျလို့ ငါထငျတယျ၊ မွအေောကျရထားဘူတာ ဘယျမှာလဲ မငျးသိလား။
☞ တနျး(ငျ)ရနျr ကြီးhတောကျ ကြို့ဇိုကျzနာ့ပွနျး
☞ သိတာပေါ့၊ ဟိုဘကျနားမှာလေ။
☞ ဇိုကျzနာr ဝျေါမခေနျ့တောကျ
☞ ဘယျနားလဲ။ ငါ မတှဘေူ့း။
☞ လမျးဖွတျကူးပွီး သှားလိုကျပါ။
☞ ကြီးhတောကျလဲာ့ ရှဲ့ရှဲ့
☞ သိပါပွီ၊ ကြေးဇူးပါ။
☞ အော့ နီကြီးhတောကျ ဖုfကငျြ့နာrယို ဆဲ့စျောမား
☞ ဒါနဲ့၊ ဒီအနားမှာ အိမျသာဘယျနားရှိလဲ မငျးသိလား။
☞ ကြဲ့hပွနျး ကြို့ယိုယီကဲာ့ ဇိုကျzကြဲ့hကဲာ့ ရှနျးh(ငျ)တနျြ့လီ
☞ ဒီဘကျမှာ တဈခုရှိတယျ၊ ဒီကုနျတိုကျထဲမှာပါ။
☞ ကောငျးပါပွီ၊ ကြေးဇူးပါ။
7:15 AM C-Sentence , Chinese
ဘာသာတိုင်း၊ လူမျိုးတိုင်းမှာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတွေ ရှိကြပါတယ်။
☞ Wǒ zuówǎn bèi nàoguǐ le.
☞ ဝေါ် ဇော်zထျန်း ပေ့နောက်ကွေလဲာ့
☞ ငါ မနေ့ညက သရဲခြောက်ခံရတယ်။
☞ Gěi tā hē yì kǒu shèngshuǐ ba.
☞ ကေထားဟဲယ်း ယိခိုရှဲင့်h(င်)ရွှေhပါ့
☞ သူ့ကို ပရိတ်ရေတစ်ငုံ တိုက်လိုက်ပါ။
☞ Yǒurén shuō nà ge lǎotàipo shì wūpó.
☞ ယိုရဲင်rရှောh နာ့ကဲာ့လောင်ထိုက်ဖော် ရှစ်h ဝူးဖော်
☞ အဲဒီအဘွားကြီးက စုန်းမကြီးဆိုပဲ။
☞ Tā yòng wūshù hài rén.
☞ ထားယုံ့(င်)ဝူးရှုh ဟိုက်ရဲင်r
☞ သူမက အောက်လမ်းပညာနဲ့ လူတွေကို ပြုစားတယ်။
☞ Tā bèi xià míhúnyào le.
☞ ထားပေ့ရှာ့ မီးဟွင်ယောက်လဲာ့
☞ သူက အောက်လမ်းပညာနဲ့ ဆေးခတ်တာကို ခံလိုက်ရတယ်။
☞ Yīnwèi háizi bèi guǐ fùshēn le.
☞ ယင်းဝေ့ ဟိုင်ဇစ်z ပေ့ကွေဖုfရှဲင်းhလဲာ့
☞ ကလေးကို တစ္ဆေပူးလို့ပါ။
☞ Jiào tā hē niàn guo zhòu de shuǐ ba.
☞ ကျောက်ထားဟဲယ်း နျန့်ကော့ကျို့hတဲ့ရွှေhပါ့
☞ သူ့ကို ရေမန်းသောက်ခိုင်းလိုက်ပါ။
☞ Tāmen měinián dōu dā péngzi jìng shén.
☞ ထားမဲင် မေနျန်တိုး တားဖဲင်း(င်)ဇစ်z ကျင့်(င်)ရှဲင်h
☞ သူတို့က နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း နတ်ကနားပေးကြတယ်။
☞ Wǒ méi kàn guo jìngshénhuì.
☞ ဝေါ်မေခန့်ကော့ ကျင့်(င်)ရှဲင်hဟွေ့
☞ ငါ နတ်ကနားပွဲ မကြည့်ဖူးပါ။
☞ Tā shì shénpó "Māmī Shèng".
☞ ထားရှစ်h ရှဲင်းhဖော် "မားမီးရှဲင့်h(င်)"
☞ သူက ကနားစီး "မာမီစိန်"ပါ။
☞ Nǐmen jiā měinián dōu jìng hǎishén ma?
☞ နီမဲင်ကျား မေနျန်တိုး ကျင့်(င်)ဟိုင်ရှဲင်hမား
☞ မင်းတို့အိမ်က နှစ်စဉ် ဦးရှင်ကြီးတင်လား။
☞ Wǒ shēn shang dài zhe hùshēnfú.
☞ ဝေါ်ရှဲင်းhရှန့်h(င်) တိုက်ကျယ်h ဟုရှဲင်းhဖူf
☞ ငါ့ကိုယ်ပေါ်မှာ အဆောင်လက်ဖွဲ့လေး ဆောင်ထားတယ်။
☞ Nǐ fùmǔ dōu tài míxìn le.
☞ နီဖုfမူတိုး ထိုက်မီရှင့်လဲာ့
☞ မင်းမိဘတွေက အရမ်း အယူသီးတာပဲ။
☞ Yǒu de shìr fēi xìn bùkě.
☞ ယိုတဲ့ရှစ်h ဖေးfရှင့်ပုခဲယ်
☞ တချို့ကိစ္စတွေက မယုံလို့မရဘူးလေ။
☞ Miǎndiànrén zài jiā lǐ guà yēzi jìngfèng shén.
☞ မြန်တျန့်ရဲင်r ဇိုက်zကျားလီ ကွာ့ယဲဇစ်z ကျင့်(င်)ဖဲင့်f(င်)ရှဲင်h
☞ မြန်မာတွေက အိမ်ထဲမှာ အုန်းသီးချိတ်ပြီး နတ်ကိုးကွယ်တယ်။
☞ Nǐ jiā lǐ gòngfèng hùzháishén ma?
☞ နီကျားလီ ကုံ့(င်)ဖဲင့်f(င်) ဟုကျိုင်းhရှဲင်hမား
☞ မင်းအိမ်မှာ အိမ်တွင်းနတ်(မင်းမဟာဂီရိ) ကိုးကွယ်လား။
☞ Tā shì yí wèi wèibǔ xiānzhī de suànmìng xiānshēng.
☞ ထားရှစ်h ယီဝေ့ ဝေ့ပူရှန်းကျီးhတဲ့ စွမ့်မျင့်(င်)ရှန်းရှဲင်းh(င်)
☞ သူက အကြားအမြင်ပေါက်တဲ့ ဗေဒင်ဆရာပါ။
☞ Tā shì tiān bú pà dì bú pà de rén.
☞ ထားရှစ်h ထျန်းပူဖာ့ တိပူဖာ့တဲ့ရဲင်r
☞ သူက ဘုရားတရားတောင် မယုံတဲ့သူပါ။
ဘာသာတိုငျး၊ လူမြိုးတိုငျးမှာ ယုံကွညျကိုးကှယျမှုဆိုငျရာ ယဉျကြေးမှုဓလထေုံ့းစံတှေ ရှိကွပါတယျ။
☞ ဝျေါ ဇျောzထနျြး ပနေ့ောကျကှလေဲာ့
☞ ငါ မနညေ့က သရဲခွောကျခံရတယျ။
☞ ကထေားဟဲယျး ယိခိုရှဲငျ့h(ငျ)ရှေhပါ့
☞ သူ့ကို ပရိတျရတေဈငုံ တိုကျလိုကျပါ။
☞ ယိုရဲငျrရှောh နာ့ကဲာ့လောငျထိုကျဖျော ရှဈh ဝူးဖျော
☞ အဲဒီအဘှားကွီးက စုနျးမကွီးဆိုပဲ။
☞ ထားယုံ့(ငျ)ဝူးရှုh ဟိုကျရဲငျr
☞ သူမက အောကျလမျးပညာနဲ့ လူတှကေို ပွုစားတယျ။
☞ ထားပရှေ့ာ့ မီးဟှငျယောကျလဲာ့
☞ သူက အောကျလမျးပညာနဲ့ ဆေးခတျတာကို ခံလိုကျရတယျ။
☞ ယငျးဝေ့ ဟိုငျဇဈz ပကှေ့ဖေုfရှဲငျးhလဲာ့
☞ ကလေးကို တစ်ဆပေူးလို့ပါ။
☞ ကြောကျထားဟဲယျး နနျြ့ကော့ကြို့hတဲ့ရှေhပါ့
☞ သူ့ကို ရမေနျးသောကျခိုငျးလိုကျပါ။
☞ ထားမဲငျ မနေနျြတိုး တားဖဲငျး(ငျ)ဇဈz ကငျြ့(ငျ)ရှဲငျh
☞ သူတို့က နှဈစဉျနှဈတိုငျး နတျကနားပေးကွတယျ။
☞ ဝျေါမခေနျ့ကော့ ကငျြ့(ငျ)ရှဲငျhဟှေ့
☞ ငါ နတျကနားပှဲ မကွညျ့ဖူးပါ။
☞ ထားရှဈh ရှဲငျးhဖျော "မားမီးရှဲငျ့h(ငျ)"
☞ သူက ကနားစီး "မာမီစိနျ"ပါ။
☞ နီမဲငျကြား မနေနျြတိုး ကငျြ့(ငျ)ဟိုငျရှဲငျhမား
☞ မငျးတို့အိမျက နှဈစဉျ ဦးရှငျကွီးတငျလား။
☞ ဝျေါရှဲငျးhရှနျ့h(ငျ) တိုကျကယျြh ဟုရှဲငျးhဖူf
☞ ငါ့ကိုယျပျေါမှာ အဆောငျလကျဖှဲ့လေး ဆောငျထားတယျ။
☞ နီဖုfမူတိုး ထိုကျမီရှငျ့လဲာ့
☞ မငျးမိဘတှကေ အရမျး အယူသီးတာပဲ။
☞ ယိုတဲ့ရှဈh ဖေးfရှငျ့ပုခဲယျ
☞ တခြို့ကိစ်စတှကေ မယုံလို့မရဘူးလေ။
☞ မွနျတနျြ့ရဲငျr ဇိုကျzကြားလီ ကှာ့ယဲဇဈz ကငျြ့(ငျ)ဖဲငျ့f(ငျ)ရှဲငျh
☞ မွနျမာတှကေ အိမျထဲမှာ အုနျးသီးခြိတျပွီး နတျကိုးကှယျတယျ။
☞ နီကြားလီ ကုံ့(ငျ)ဖဲငျ့f(ငျ) ဟုကြိုငျးhရှဲငျhမား
☞ မငျးအိမျမှာ အိမျတှငျးနတျ(မငျးမဟာဂီရိ) ကိုးကှယျလား။
☞ ထားရှဈh ယီဝေ့ ဝပေူ့ရှနျးကြီးhတဲ့ စှမျ့မငျြ့(ငျ)ရှနျးရှဲငျးh(ငျ)
☞ သူက အကွားအမွငျပေါကျတဲ့ ဗဒေငျဆရာပါ။
☞ ထားရှဈh ထနျြးပူဖာ့ တိပူဖာ့တဲ့ရဲငျr
☞ သူက ဘုရားတရားတောငျ မယုံတဲ့သူပါ။
7:07 AM C-Dialogue , Chinese
သင် အဲယားကွန်း ကြိုက်ပါသလား။ ဒါပေမယ့် အခန်းထဲမှာ အချိန်ပြည့် အဲယားကွန်းမဖွင့်ဖို့လည်း သတိပြုအုံးနော်။
☞ Nǐ de fángjiān zěnme zhème lěng?
☞ နီတဲ့ဖန်f(င်)ကျန်း ဇဲင်zမဲာ့ ကျဲ့hမဲာ့လဲင်(င်)
☞ မင်းရဲ့အခန်းက ဘာလို့ ဒီလောက်အေးနေတာလဲ။
☞ Jīntiān shìwài wēndù yǐjīng chāoguò le sān shí qī dù. Suǒyǐ wǒ yì huí fángjiān jiù kāi le kōngtiáo.
☞ ကျင်းထျန်း ရှစ်hဝိုက်ဝဲင်းတု ယီကျင်း(င်)ချောင်းhကော့လဲာ့ စန်းရှီhချီးတု စောယီ ဝေါ်ယိဟွေဖန်f(င်)ကျန်း ကျို့ခိုင်းလဲာ့ ခုံး(င်)ထျောင်
☞ ဒီနေ့ အခန်းအပြင်ဘက်မှာ အပူချိန်က ၃၇ ဒီဂရီ ကျော်သွားပြီ။ ဒါကြောင့် ငါက အခန်းကို ပြန်ရောက်တာနဲ့ အဲယားကွန်းတန်းဖွင့်တာပါ။
☞ Nǐ de liǎnsè hěn bù hǎo, nǎlǐ bù shūfu ma?
☞ နီတဲ့လျန်စဲ့ ဟဲင်ပုဟောင် နားလီ ပုရှူးhဖုfမား
☞ မင်းရဲ့မျက်နှာ သိပ်မကောင်းပါလား၊ နေမကောင်းလို့လား။
☞ Wǒ bù zhīdào zěnme le, xiànzài tóu téng de lìhai.
☞ ဝေါ်ပုကျီးhတောက် ဇဲင်zမဲာ့လဲာ့ ရှန့်ဇိုက်z ထိုထဲင်(င်)တဲ့ လိဟိုက်
☞ ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ ငါမသိပါဘူးကွာ၊ အခု ခေါင်းကိုက်တာ တော်တော်ဆိုးနေတယ်။
☞ Zhè hěn kěnéng shì "kōngtiáo bìng".
☞ ကျဲ့hဟဲင်းခဲယ်နဲင်(င်)ရှစ်h "ခုံး(င်)ထျောင်ပျင့်(င်)"
☞ ဒါက "အဲယားကွန်းရောဂါ" ဆိုတာ သေချာသွားပြီ။
☞ "Kōngtiáo bìng"? Shì kōngtiáo ràng wǒ shēngbìng le ma?
☞ "ခုံး(င်)ထျောင်ပျင့်(င်)" ရှစ်hခုံး(င်)ထျောင်ရန့်r(င်)ဝေါ် ရှဲင်းh(င်)ပျင့်(င်)လဲာ့မား
☞ "အဲယားကွန်းရောဂါ"။ ငါက အဲယားကွန်းကြောင့် ရောဂါဖြစ်နေတာလား။
☞ Hěn kěnéng shì. Nǐ de fángjiān yìzhí guān zhe mén, kōngqì bù néng liútōng, érqiě fángjiān lǐ de wēndù tài dī, nǐ yòu chuān de tài shǎo.
☞ ဟဲင်းခဲယ်နဲင်(င်)ရှစ်h နီတဲ့ဖန်f(င်)ကျန်း ယိကျီhကွမ်းကျယ်hမဲင် ခုံး(င်)ချိ ပုနဲင်း(င်)လျိုထုံး(င်) အဲယ်းrချယ် ဖန်f(င်)ကျန်းလီတဲ့ဝဲင်းတု ထိုက်တီး နီယို့ချွမ်းhတဲ့ ထိုက်ရှောင်h
☞ သိပ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ မင်းအခန်းက တံခါးကို အမြဲပိတ်ထားတော့ လေဝင်လေထွက် မရှိနိုင်ဘူး၊ နောက်ပြီး အခန်းထဲက အပူချိန် အရမ်းကျနေတယ်၊ မင်းဝတ်ထားတာကလည်း အရမ်းနည်း(ပါး)တယ်။
☞ Nǐ gāi zěnme bàn? Wǒ bù xiǎng shēngbìng a.
☞ နာ့ ကိုင်းဇဲင်zမဲာ့ပန့် ဝေါ်ပုရှန်(င်)ရှဲင်းh(င်)ပျင့်(င်)အား
☞ ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။ ငါ နေမကောင်းမဖြစ်ချင်ဘူး။
☞ Guān diào kōngtiáo ba. Xiànzài shì wài liángkuài yìxiē le, yě qǐ fēng le, wǒ bāng nǐ bǎ chuānghù dǎkāi.
☞ ကွမ်းတျောက် ခုံး(င်)ထျောင်ပါ့ ရှန့်ဇိုက်z ရှစ်hဝိုက် လျန်(င်)ခွိုက်ယိရှဲလဲာ့ ယဲချီဖဲင်းf(င်)လဲာ့ ဝေါ်ပန်း(င်)နီ ပါချွမ်းh(င်)ဟု တာခိုင်း
☞ အဲယားကွန်း ပိတ်လိုက်ပေါ့။ အခု အခန်းအပြင်မှာ တော်တော်အေးနေပါပြီ၊ လေလည်း တိုက်နေပြီ၊ ငါ မင်းကိုကူပြီး ပြတင်းပေါက်တွေ လိုက်ဖွင့်ပေးမယ်။
☞ Hǎo de, xièxie nǐ.
☞ ဟောင်တဲ့ ရှဲ့ရှဲ့နီ
☞ ကောင်းပါပြီ၊ ကျေးဇူးပါပဲ။
သငျ အဲယားကှနျး ကွိုကျပါသလား။ ဒါပမေယျ့ အခနျးထဲမှာ အခြိနျပွညျ့ အဲယားကှနျးမဖှငျ့ဖို့လညျး သတိပွုအုံးနျော။
☞ နီတဲ့ဖနျf(ငျ)ကနျြး ဇဲငျzမဲာ့ ကြဲ့hမဲာ့လဲငျ(ငျ)
☞ မငျးရဲ့အခနျးက ဘာလို့ ဒီလောကျအေးနတောလဲ။
☞ ကငျြးထနျြး ရှဈhဝိုကျဝဲငျးတု ယီကငျြး(ငျ)ခြောငျးhကော့လဲာ့ စနျးရှီhခြီးတု စောယီ ဝျေါယိဟှဖေနျf(ငျ)ကနျြး ကြို့ခိုငျးလဲာ့ ခုံး(ငျ)ထြောငျ
☞ ဒီနေ့ အခနျးအပွငျဘကျမှာ အပူခြိနျက ၃၇ ဒီဂရီ ကြျောသှားပွီ။ ဒါကွောငျ့ ငါက အခနျးကို ပွနျရောကျတာနဲ့ အဲယားကှနျးတနျးဖှငျ့တာပါ။
☞ နီတဲ့လနျြစဲ့ ဟဲငျပုဟောငျ နားလီ ပုရှူးhဖုfမား
☞ မငျးရဲ့မကျြနှာ သိပျမကောငျးပါလား၊ နမေကောငျးလို့လား။
☞ ဝျေါပုကြီးhတောကျ ဇဲငျzမဲာ့လဲာ့ ရှနျ့ဇိုကျz ထိုထဲငျ(ငျ)တဲ့ လိဟိုကျ
☞ ဘယျလိုဖွဈနလေဲ ငါမသိပါဘူးကှာ၊ အခု ခေါငျးကိုကျတာ တျောတျောဆိုးနတေယျ။
☞ ကြဲ့hဟဲငျးခဲယျနဲငျ(ငျ)ရှဈh "ခုံး(ငျ)ထြောငျပငျြ့(ငျ)"
☞ ဒါက "အဲယားကှနျးရောဂါ" ဆိုတာ သခြောသှားပွီ။
☞ "ခုံး(ငျ)ထြောငျပငျြ့(ငျ)" ရှဈhခုံး(ငျ)ထြောငျရနျ့r(ငျ)ဝျေါ ရှဲငျးh(ငျ)ပငျြ့(ငျ)လဲာ့မား
☞ "အဲယားကှနျးရောဂါ"။ ငါက အဲယားကှနျးကွောငျ့ ရောဂါဖွဈနတောလား။
☞ ဟဲငျးခဲယျနဲငျ(ငျ)ရှဈh နီတဲ့ဖနျf(ငျ)ကနျြး ယိကြီhကှမျးကယျြhမဲငျ ခုံး(ငျ)ခြိ ပုနဲငျး(ငျ)လြိုထုံး(ငျ) အဲယျးrခယျြ ဖနျf(ငျ)ကနျြးလီတဲ့ဝဲငျးတု ထိုကျတီး နီယို့ခြှမျးhတဲ့ ထိုကျရှောငျh
☞ သိပျဖွဈနိုငျတာပေါ့။ မငျးအခနျးက တံခါးကို အမွဲပိတျထားတော့ လဝေငျလထှေကျ မရှိနိုငျဘူး၊ နောကျပွီး အခနျးထဲက အပူခြိနျ အရမျးကနြတေယျ၊ မငျးဝတျထားတာကလညျး အရမျးနညျး(ပါး)တယျ။
☞ နာ့ ကိုငျးဇဲငျzမဲာ့ပနျ့ ဝျေါပုရှနျ(ငျ)ရှဲငျးh(ငျ)ပငျြ့(ငျ)အား
☞ ဒါဆို ဘယျလိုလုပျရမှာလဲ။ ငါ နမေကောငျးမဖွဈခငျြဘူး။
☞ ကှမျးတြောကျ ခုံး(ငျ)ထြောငျပါ့ ရှနျ့ဇိုကျz ရှဈhဝိုကျ လနျြ(ငျ)ခှိုကျယိရှဲလဲာ့ ယဲခြီဖဲငျးf(ငျ)လဲာ့ ဝျေါပနျး(ငျ)နီ ပါခြှမျးh(ငျ)ဟု တာခိုငျး
☞ အဲယားကှနျး ပိတျလိုကျပေါ့။ အခု အခနျးအပွငျမှာ တျောတျောအေးနပေါပွီ၊ လလေညျး တိုကျနပွေီ၊ ငါ မငျးကိုကူပွီး ပွတငျးပေါကျတှေ လိုကျဖှငျ့ပေးမယျ။
☞ ဟောငျတဲ့ ရှဲ့ရှဲ့နီ
☞ ကောငျးပါပွီ၊ ကြေးဇူးပါပဲ။
9:52 PM C-Sentence , Chinese
စားသောက်ဆိုင်မှာ စားကြသောက်ကြတဲ့အခါ ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားစုလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Yǒu càidān ma?
☞ မီနူး ရှိလား။
☞ Zhè shì càidān.
☞ ကျဲ့hရှစ်h ဆိုက်တန်း
☞ ဒါ မီနူးပါ။
☞ Diǎn cài le méiyǒu?
☞ ဟင်း မှာပြီးပြီလား။
☞ Gāng diǎn le.
☞ ခုလေးတင် မှာပြီးပြီ။
☞ Dùzi è le, kuài diǎn shàngcài ba.
☞ တုဇစ်zအဲာ့လဲာ့ ခွိုက်တျန်ရှန့်h(င်)ဆိုက်ပါ့
☞ ဗိုက်ဆာပြီ၊ မြန်မြန်လေး လုပ်ပေးပါ။
☞ Yǒu shénme hǎochī de?
☞ ယိုရှဲhမဲာ့ ဟောင်ချီးhတဲ့
☞ စားကောင်းတဲ့ဟာ ဘာရှိလဲ။
☞ Zhè shì zhèlǐ de zhāopáicài.
☞ ကျဲ့hရှစ်h ကျဲ့hလီတဲ့ ကျောင်းhဖိုင်ဆိုက်
☞ ဒါက ဒီက Main dish ပါ။
☞ Nǐ zěnme jìkǒu?
☞ နီးဇဲင်zမဲာ့ ကျိခို
☞ မင်းက ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး အစားရှောင်တာလဲ။
☞ Zhè dào cài chī guo ma?
☞ ကျဲ့hတောက်ဆိုက် ချီးhကော့မား
☞ ဒီဟင်း စားဖူးလား။
10. 算账。/ 买单。
☞ Suàn zhàng. / Mǎi dān.
☞ စွမ့်ကျန့်h(င်) / မိုင်တန်း
☞ Zhè cì wǒ lái qǐngkè.
☞ ကျဲ့hဆစ် ဝေါ်လိုင်းချင်(င်)ခဲါ့
☞ ဒီတစ်ခါ ငါပြုစုပါ့မယ်။
☞ Wǒ lái tāo qián.
☞ ငါ ရှင်းပါ့မယ်။
☞ Wǒ lái fùkuǎn.
☞ aa zhì ba.
☞ AA ကျိhပါ့
☞ ကိုယ်စားတာ ကိုယ်ရှင်းပေါ့။
☞ Gè fù gè de.
☞ ကဲာ့ဖုf ကဲာ့တဲ့
☞ Xiàcì wǒ lái qǐngkè.
☞ ရှာ့ဆစ် ဝေါ်လိုင်းချင်(င်)ခဲါ့
☞ နောက်တစ်ကြိမ် ငါရှင်းပါ့မယ်။
☞ Zánmen liǎ shéi gēn shéi ya.
☞ ဇန်းzမဲင်လျာ ရှေhကဲင်းရှေhယား
☞ ဒီလူနဲ့ ဒီလူပဲဟာ။
☞ Zánmen shì zìjǐrén.
☞ ဇန်းzမဲင်ရှစ်h ဇစ်zကျီရဲင်r
စားသောကျဆိုငျမှာ စားကွသောကျကွတဲ့အခါ ပွောလရှေိ့တဲ့ စကားစုလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ မီနူး ရှိလား။
☞ ကြဲ့hရှဈh ဆိုကျတနျး
☞ ဒါ မီနူးပါ။
☞ ဟငျး မှာပွီးပွီလား။
☞ ခုလေးတငျ မှာပွီးပွီ။
☞ တုဇဈzအဲာ့လဲာ့ ခှိုကျတနျြရှနျ့h(ငျ)ဆိုကျပါ့
☞ ဗိုကျဆာပွီ၊ မွနျမွနျလေး လုပျပေးပါ။
☞ ယိုရှဲhမဲာ့ ဟောငျခြီးhတဲ့
☞ စားကောငျးတဲ့ဟာ ဘာရှိလဲ။
☞ ကြဲ့hရှဈh ကြဲ့hလီတဲ့ ကြောငျးhဖိုငျဆိုကျ
☞ နီးဇဲငျzမဲာ့ ကြိခို
☞ မငျးက ဘယျလိုဖွဈပွီး အစားရှောငျတာလဲ။
☞ ကြဲ့hတောကျဆိုကျ ခြီးhကော့မား
☞ ဒီဟငျး စားဖူးလား။
☞ စှမျ့ကနျြ့h(ငျ) / မိုငျတနျး
☞ ကြဲ့hဆဈ ဝျေါလိုငျးခငျြ(ငျ)ခဲါ့
☞ ဒီတဈခါ ငါပွုစုပါ့မယျ။
☞ ငါ ရှငျးပါ့မယျ။
☞ AA ကြိhပါ့
☞ ကိုယျစားတာ ကိုယျရှငျးပေါ့။
☞ ရှာ့ဆဈ ဝျေါလိုငျးခငျြ(ငျ)ခဲါ့
☞ နောကျတဈကွိမျ ငါရှငျးပါ့မယျ။
☞ ဇနျးzမဲငျလြာ ရှေhကဲငျးရှေhယား
☞ ဒီလူနဲ့ ဒီလူပဲဟာ။
☞ ဇနျးzမဲငျရှဈh ဇဈzကြီရဲငျr
9:29 PM C-Text , Chinese
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသားမျိုးနွယ်စုများစွာ ရှိကြသလို မတူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံတွေကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်မှာ မော်စော တိုင်းရင်းသားလို့ခေါ်တဲ့ မျိုးနွယ်စုတစ်ခု ရှိပါတယ်။
ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကို လူတွေက "အမျိုးသမီးနိုင်ငံ" လို့ ခေါ်ကြတယ်၊ အကြောင်းကတော့ အဲဒီဒေသမှာ အရာရာတိုင်းကို အမျိုးသမီးဖက်က ဆုံးဖြတ်ကြလို့ပါပဲ။
မော်စောတိုင်းရင်းသား ယောင်္ကျားလေး၊ မိန်းကလေးတွေဟာ လက်မထပ်ကြပါဘူး၊ အတူတူလည်း မနေကြပါဘူး။
ညပိုင်းရောက်တာနဲ့ ယောင်္ကျားလေးဖက်က အထူးလျှို့ဝှက်အမှတ်အသားနဲ့ မိန်းကလေးဖက်က အခန်းတံခါးကို လာခေါက်ပြီး၊ မိန်းကလေးအိမ်မှာ နေထိုင်တယ်။
မနက်ပိုင်းရောက်တာနဲ့ ယောင်္ကျားလေးက ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ပြီး၊ ပုံမှန် နေရိုးနေစဉ်အတိုင်း နေထိုင်ပြီး၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြတယ်။
တကယ်လို့ တဖက်ဖက်က အခြားတစ်ဖက်ကို သဘောမကျတော့ရင်၊ ပတ်သက်မှုကို အချိန်မရွေး အဆုံးသတ်လို့ရပါတယ်။
ယောင်္ကျားလေးဖက်က မိန်းကလေးဖက်ကို အခန်းတံခါး လာမခေါက်တော့တာဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးဖက်က ယောင်္ကျားလေးဖက်ကို တံခါးမဖွင့်ပေးတော့တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
တကယ်လို့ မိန်းကလေးက ကလေးမွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ ကလေးကို မိန်းကလေးဖက်က ကျွေးမွေးပြုစုရပါတယ်။
ကလေးတစ်လပြည့်တဲ့အခါမှာ မွေးဖခင်က စားသောက်ပွဲ ကျင်းပပြီး၊ ဒီကလေးဟာ မိမိကလေးဖြစ်ကြောင်း အားလုံးကို ပြောပြရပါတယ်။
တခြားအချိန်တွေမှာတော့ မွေးဖခင်ဟာ ကလေးနဲ့ အတူမနေသလို ကလေးကို ကျွေးမွေးပြုစုရမယ့် တာဝန်တွေကိုလည်း ယူစရာမလိုပါဘူး။
ဒီလိုမျိုး "အမျိုးသမီးနိုင်ငံ" ကို သင် သဘောကျပါသလား။
2. 云南省〔Yúnnán shěng〕ယူနန်ပြည်နယ်
8. 由〔yóu〕မှ / က
25. 关系〔guānxì〕ပတ်သက်မှု။ ဆက်စပ်မှု
26. 要么〔yàome〕ရင်။ လျှင်
35. 责任〔zérèn〕တာဝန်။ ဝတ္တရား
Photo Credit- Original Uploader (Internet)
ကမ်ဘာပျေါမှာ လူသားမြိုးနှယျစုမြားစှာ ရှိကွသလို မတူညီတဲ့ ယဉျကြေးမှု ဓလထေုံ့းစံတှကေလညျး စိတျဝငျစားစရာကောငျးလှပါတယျ။
တရုတျနိုငျငံ၊ ယူနနျပွညျနယျမှာ "မျောစော တိုငျးရငျးသား" လို့ချေါတဲ့ မြိုးနှယျစုတဈခု ရှိပါတယျ။
ဒီတိုငျးရငျးသားတှကေို လူတှကေ "အမြိုးသမီးနိုငျငံ" လို့ ချေါကွတယျ၊ အကွောငျးကတော့ အဲဒီဒသေမှာ အရာရာတိုငျးကို အမြိုးသမီးဖကျက ဆုံးဖွတျကွလို့ပါပဲ။
"မျောစောတိုငျးရငျးသား" ယောကငြ်္ားလေး၊ မိနျးကလေးတှဟော လကျမထပျကွပါဘူး၊ အတူတူလညျး မနကွေပါဘူး။
ညပိုငျးရောကျတာနဲ့ ယောကငြ်္ားလေးဖကျက အထူးလြှို့ဝှကျအမှတျအသားနဲ့ မိနျးကလေးဖကျက အခနျးတံခါးကို လာခေါကျပွီး၊ မိနျးကလေးအိမျမှာ နထေိုငျတယျ။
မနကျပိုငျးရောကျတာနဲ့ ယောကငြ်္ားလေးက ကိုယျ့အိမျကိုယျပွနျပွီး၊ ပုံမှနျ နရေိုးနစေဉျအတိုငျး နထေိုငျပွီး၊ အလုပျလုပျကိုငျကွတယျ။
တကယျလို့ တဖကျဖကျက အခွားတဈဖကျကို သဘောမကတြော့ရငျ၊ ပတျသကျမှုကို အခြိနျမရှေး အဆုံးသတျလို့ရပါတယျ။
ယောကငြ်္ားလေးဖကျက မိနျးကလေးဖကျကို အခနျးတံခါး လာမခေါကျတော့တာဖွဈဖွဈ၊ မိနျးကလေးဖကျက ယောကငြ်္ားလေးဖကျကို တံခါးမဖှငျ့ပေးတော့တာဖွဈဖွဈပေါ့။
တကယျလို့ မိနျးကလေးက ကလေးမှေးခဲ့မယျဆိုရငျ၊ ကလေးကို မိနျးကလေးဖကျက ကြှေးမှေးပွုစုရပါတယျ။
ကလေးတဈလပွညျ့တဲ့အခါမှာ မှေးဖခငျက စားသောကျပှဲ ကငျြးပပွီး၊ ဒီကလေးဟာ မိမိကလေးဖွဈကွောငျး အားလုံးကို ပွောပွရပါတယျ။
တခွားအခြိနျတှမှောတော့ မှေးဖခငျဟာ ကလေးနဲ့ အတူမနသေလို ကလေးကို ကြှေးမှေးပွုစုရမယျ့ တာဝနျတှကေိုလညျး ယူစရာမလိုပါဘူး။
ဒီလိုမြိုး "အမြိုးသမီးနိုငျငံ" ကို သငျ သဘောကပြါသလား။
2. 云南省〔Yúnnán shěng〕ယူနနျပွညျနယျ
8. 由〔yóu〕မှ / က
25. 关系〔guānxì〕ပတျသကျမှု။ ဆကျစပျမှု
26. 要么〔yàome〕ရငျ။ လြှငျ
35. 责任〔zérèn〕တာဝနျ။ ဝတ်တရား
သင် တီဗီကြည့်ရတာ ကြိုက်သလား။
9:18 PM C-Sentence , Chinese
တီဗီကြည့်ခြင်းဟာ အပျင်းပြေ၊ အပန်းဖြေရုံသာမက အထွေထွေ ဗဟုသုတတွေကိုပါ တိုးပွားစေပါတယ်။ သင်ရော နေ့စဉ် တီဗီကြည့်သလား။
☞ Kāi diànshì ba.
☞ TV ဖွင့်လိုက်ပါ။
☞ Diànshì huài le.
☞ တျန့်ရှစ်h ဟွိုက်လဲာ့
☞ TV ပျက်သွားပြီ။
☞ Wǒ xiǎng kàn diànshì.
☞ ဝေါရှန်(င်)ခန့် တျန့်ရှစ်h
☞ ငါ TV ကြည့်ချင်တယ်။
☞ Tā zài kàn diànshì.
☞ ထားဇိုက်zခန့် တျန့်ရှစ်h
☞ သူ TV ကြည့်နေတုန်း။
☞ Tā chángchang shàng diànshì.
☞ ထား ချန်းh(င်)ချန်h(င်)ရှန့်h(င်) တျန့်ရှစ်h
☞ သူ TV မှာ အမြဲပါတယ်။
☞ Bàba měitiān dōu kàn diànshì.
☞ ပါ့ပါ မေထျန်းတိုးခန့် တျန့်ရှစ်h
☞ အဖေ နေ့တိုင်း TV ကြည့်တယ်။
☞ Diànshì zhèngzài bō zúqiúsài.
☞ တျန့်ရှစ်h ကျဲင့်h(င်)ဇိုက်zပေါ ဇူးzချိုစိုက်
☞ TV မှာ ဘော်လုံးပွဲ လွှင့်နေတယ်။
☞ Nǐ jīntiān yǒu kàn diànshì ma?
☞ နီ ကျင်းထျန်းယိုခန့် တျန့်ရှစ်hမား
☞ မင်း ဒီနေ့ TV ကြည့်မှာလား။
☞ Nǐ wòshì lǐ yǒu diànshì ma?
☞ နီဝေါ့ရှစ်hလီ ယိုတျန့်ရှစ်hမား
☞ မင်းအိပ်ခန်းထဲမှာ TV ရှိလား။
☞ Nǐ zuì xǐhuan shénme diànshìjù?
☞ နီ ဇွေ့zရှီဟွမ်း ရှဲhမဲာ့ တျန့်ရှစ်hကျွိ
☞ ဘာ TV ဇာတ်လမ်း မင်း အကြိုက်ဆုံးလဲ။
☞ Bǎ diànshì shēngyīn tiáo dà diǎnr.
☞ ပါ တျန့်ရှစ်h ရှဲင်းh(င်)ယင်း ထျောင်တာ့တျန်r
☞ TV အသံကို နည်းနည်းကျယ်လိုက်ပါ။
☞ Wǒ kàn le liǎng ge xiǎoshí diànshì.
☞ ဝေါ်ခန့်လဲာ့ လျန်(င်)ကဲာ့ရှောင်ရှီ တျန့်ရှစ်h
☞ ငါ နှစ်နာရီကြာ TV ကြည့်ခဲ့တယ်။
☞ Tā yì huí dào jiā, jiù kàn diànshì.
☞ ထား ယိဟွေတောက်ကျား ကျို့ခန့် တျန့်ရှစ်h
☞ သူ အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့၊ TV တန်းကြည့်တာပဲ။
☞ Wǒ míngtiān qù mǎi diànshìguì.
☞ ဝေါ် မျင်(င်)ထျန်း ချွိမိုင် တျန့်ရှစ်hကွေ့
☞ ငါ မနက်ဖြန် TV စင် သွားဝယ်မယ်။
☞ Wǒ bù xǐhuan kàn diànshì guǎnggào.
☞ ဝေါ် ပုရှီဟွမ်းခန့် တျန့်ရှစ်hကွမ်(င်)ကောက်
☞ ငါ TV ကြော်ငြာ ကြည့်ရတာ မကြိုက်ဘူး။
☞ Wǒ xiǎng yào yì tái píngbǎn diànshì.
☞ ဝေါရှန်(င်)ယောက် ယိထိုင် ဖျင်း(င်)ပန်တျန့်ရှစ်h
☞ ငါ Flat TV တစ်လုံး လိုချင်တယ်။
☞ Wǒ bǎ diànshì guān le.
☞ ဝေါပါတျန့်ရှစ်h ကွမ်းလဲာ့
☞ ငါ TV ကို ပိတ်လိုက်ပြီ။
☞ Tài wǎn le, bié kàn diànshì le.
☞ ထိုက်ဝမ်လဲာ့ ပြယ်ခန့် တျန့်ရှစ်hလဲာ့
☞ ညဥ့်နက်နေပြီ၊ TV မကြည့်နဲ့တော့။
☞ Jīntiān de diànshì jiémù hěn hǎo kàn.
☞ ကျင်းထျန်းတဲ့ တျန့်ရှစ်hကျယ်မု ဟဲင်းဟောင်ခန့်
☞ ဒီနေ့ TV အစီအစဉ်တွေ အရမ်း ကြည့်ကောင်းတယ်။
☞ Tā zài Zhōngguó zhōngyāng diànshìtái zuò gōngzuò.
☞ ထားဇိုက်z ကျုံးh(င်)ကော် ကျုံးh(င်)ယန်း(င်) တျန့်ရှစ်hထိုင် ဇော့zကုံး(င်)ဇော့z
☞ သူက တရုတ်နိုင်ငံ CCTV သတင်းဌာနမှာ အလုပ်လုပ်တယ်။
သငျ တီဗီကွညျ့ရတာ ကွိုကျသလား။
တီဗီကွညျ့ခွငျးဟာ အပငျြးပွေ၊ အပနျးဖွရေုံသာမက အထှထှေေ ဗဟုသုတတှကေိုပါ တိုးပှားစပေါတယျ။ သငျရော နစေ့ဉျ တီဗီကွညျ့သလား။
☞ TV ဖှငျ့လိုကျပါ။
☞ တနျြ့ရှဈh ဟှိုကျလဲာ့
☞ TV ပကျြသှားပွီ။
☞ ဝေါရှနျ(ငျ)ခနျ့ တနျြ့ရှဈh
☞ ငါ TV ကွညျ့ခငျြတယျ။
☞ ထားဇိုကျzခနျ့ တနျြ့ရှဈh
☞ သူ TV ကွညျ့နတေုနျး။
☞ ထား ခနျြးh(ငျ)ခနျြh(ငျ)ရှနျ့h(ငျ) တနျြ့ရှဈh
☞ သူ TV မှာ အမွဲပါတယျ။
☞ ပါ့ပါ မထေနျြးတိုးခနျ့ တနျြ့ရှဈh
☞ အဖေ နတေို့ငျး TV ကွညျ့တယျ။
☞ တနျြ့ရှဈh ကြဲငျ့h(ငျ)ဇိုကျzပေါ ဇူးzခြိုစိုကျ
☞ TV မှာ ဘျောလုံးပှဲ လှငျ့နတေယျ။
☞ နီ ကငျြးထနျြးယိုခနျ့ တနျြ့ရှဈhမား
☞ မငျး ဒီနေ့ TV ကွညျ့မှာလား။
☞ နီဝေါ့ရှဈhလီ ယိုတနျြ့ရှဈhမား
☞ မငျးအိပျခနျးထဲမှာ TV ရှိလား။
☞ နီ ဇှေ့zရှီဟှမျး ရှဲhမဲာ့ တနျြ့ရှဈhကြှိ
☞ ဘာ TV ဇာတျလမျး မငျး အကွိုကျဆုံးလဲ။
☞ ပါ တနျြ့ရှဈh ရှဲငျးh(ငျ)ယငျး ထြောငျတာ့တနျြr
☞ TV အသံကို နညျးနညျးကယျြလိုကျပါ။
☞ ဝျေါခနျ့လဲာ့ လနျြ(ငျ)ကဲာ့ရှောငျရှီ တနျြ့ရှဈh
☞ ငါ နှဈနာရီကွာ TV ကွညျ့ခဲ့တယျ။
☞ ထား ယိဟှတေောကျကြား ကြို့ခနျ့ တနျြ့ရှဈh
☞ သူ အိမျပွနျရောကျတာနဲ့၊ TV တနျးကွညျ့တာပဲ။
☞ ဝျေါ မငျြ(ငျ)ထနျြး ခြှိမိုငျ တနျြ့ရှဈhကှေ့
☞ ငါ မနကျဖွနျ TV စငျ သှားဝယျမယျ။
☞ ဝျေါ ပုရှီဟှမျးခနျ့ တနျြ့ရှဈhကှမျ(ငျ)ကောကျ
☞ ငါ TV ကွျောငွာ ကွညျ့ရတာ မကွိုကျဘူး။
☞ ဝေါရှနျ(ငျ)ယောကျ ယိထိုငျ ဖငျြး(ငျ)ပနျတနျြ့ရှဈh
☞ ငါ Flat TV တဈလုံး လိုခငျြတယျ။
☞ ဝေါပါတနျြ့ရှဈh ကှမျးလဲာ့
☞ ငါ TV ကို ပိတျလိုကျပွီ။
☞ ထိုကျဝမျလဲာ့ ပွယျခနျ့ တနျြ့ရှဈhလဲာ့
☞ ညဥျ့နကျနပွေီ၊ TV မကွညျ့နဲ့တော့။
☞ ကငျြးထနျြးတဲ့ တနျြ့ရှဈhကယျြမု ဟဲငျးဟောငျခနျ့
☞ ဒီနေ့ TV အစီအစဉျတှေ အရမျး ကွညျ့ကောငျးတယျ။
☞ ထားဇိုကျz ကြုံးh(ငျ)ကျော ကြုံးh(ငျ)ယနျး(ငျ) တနျြ့ရှဈhထိုငျ ဇော့zကုံး(ငျ)ဇော့z
☞ သူက တရုတျနိုငျငံ CCTV သတငျးဌာနမှာ အလုပျလုပျတယျ။
9:13 PM C-Dialogue , Chinese
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စတင်သိကျွမ်းကြရင် အပြန်အလှန် နာမည်မေးပြီး၊ အလာပသလာပတွေ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
☞ Dǎrǎo la, nǐ jiào shénme míngzì?
☞ တားရောင်rလား နီကျောက် ရှဲhမဲာ့မျင်(င်)ဇစ်z
☞ တဆိတ်လောက်၊ ခင်ဗျားနာမည် ဘာခေါ်သလဲ။
☞ Wǒ jiào Dàwèi, nǐ ne?
☞ ဝေါ်ကျောက် တာ့ဝေ့ နီနဲ
☞ ကျွန်တော်က David ပါ၊ ခင်ဗျားရော။
☞ Wǒ shì Yuēhàn.
☞ ဝေါ်ရှစ်h ယွဲဟန့်
☞ ကျွန်တော်က John ပါ။
☞ Nǐ de Yīngyǔ shuō de hěn hǎo.
☞ နီတဲ့ယင်း(င်)ယွီ ရှောhတဲ့ဟဲင်းဟောင်
☞ ခင်ဗျား အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာ အရမ်းကောင်းတယ်။
☞ Nǐ zhīdào xiànzài jǐ diǎn le ma?
☞ နီကျီးhတောက် ရှန့်ဇိုက်z ကျီးတျန်လဲာ့မား
☞ အခု ဘယ်နှစ်နာရီထိုးပြီလဲ ခင်ဗျားသိလား။
☞ Wǔ diǎn shí fēn.
☞ ဝူးတျန် ရှီhဖဲင်းf
☞ ငါးနာရီ ဆယ်မိနစ်ပါ။
☞ Nǐ shuō shénme?
☞ ခင်ဗျား ဘာပြောလိုက်ပါလိမ့်။
☞ Wǒ shuō wǔ diǎn shí fēn.
☞ ဝေါ်ရှောh ဝူးတျန် ရှီhဖဲင်းf
☞ ငါးနာရီ ဆယ်မိနစ်လို့ ကျွန်တော် ပြောလိုက်တာပါ။
☞ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျေးဇူးပါ။
☞ Bú kèqi.
တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ စတငျသိကြှမျးကွရငျ အပွနျအလှနျ နာမညျမေးပွီး၊ အလာပသလာပတှေ ပွောလရှေိ့ပါတယျ။
☞ တားရောငျrလား နီကြောကျ ရှဲhမဲာ့မငျြ(ငျ)ဇဈz
☞ တဆိတျလောကျ၊ ခငျဗြားနာမညျ ဘာချေါသလဲ။
☞ ဝျေါကြောကျ တာ့ဝေ့ နီနဲ
☞ ကြှနျတျောက David ပါ၊ ခငျဗြားရော။
☞ ဝျေါရှဈh ယှဲဟနျ့
☞ ကြှနျတျောက John ပါ။
☞ နီတဲ့ယငျး(ငျ)ယှီ ရှောhတဲ့ဟဲငျးဟောငျ
☞ ခငျဗြား အင်ျဂလိပျလိုပွောတာ အရမျးကောငျးတယျ။
☞ နီကြီးhတောကျ ရှနျ့ဇိုကျz ကြီးတနျြလဲာ့မား
☞ အခု ဘယျနှဈနာရီထိုးပွီလဲ ခငျဗြားသိလား။
☞ ဝူးတနျြ ရှီhဖဲငျးf
☞ ငါးနာရီ ဆယျမိနဈပါ။
☞ ခငျဗြား ဘာပွောလိုကျပါလိမျ့။
☞ ဝျေါရှောh ဝူးတနျြ ရှီhဖဲငျးf
☞ ငါးနာရီ ဆယျမိနဈလို့ ကြှနျတျော ပွောလိုကျတာပါ။
☞ ဟုတျကဲ့၊ ကြေးဇူးပါ။
9:07 PM C-Dialogue , Chinese
အလာပသလာပ ပြောဆိုတဲ့အခါ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် မေးမြန်းကြပုံလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Dǎrǎo la, nǐ shì Měiguórén ma?
☞ တားရောင်rလား နီရှစ်h မေကောရဲင်rမား
☞ တဆိတ်လောက်၊ ခင်ဗျားက အမေရိကန်လူမျိုးလား။
☞ Nǐ huì shuō Yīngyǔ ma?
☞ နီဟွေ့ရှောh ယင်း(င်)ယွီမား
☞ ခင်ဗျား အင်္ဂလိပ်လို ပြောတတ်လား။
☞ Yì diǎn dian, dànshì shuō de bù hǎo.
☞ ယိတျန်းတျန် တန့်ရှစ်h ရှောhတဲ့ပုဟောင်
☞ နည်းနည်းပေါ့၊ ဒါပေမယ့် ပြောတာ မကောင်းပါဘူး။
☞ Nǐ zài zhèr dāi le duō jiǔ la?
☞ နီဇိုက်zကျဲ့r တိုင်းလဲာ့တောကျိုလား
☞ ခင်ဗျား ဒီမှာနေတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။
☞ Liǎng ge yuè le.
☞ Nǐ shì zuò shénme gōngzuò de?
☞ နီရှစ်hဇော့z ရှဲhမဲာ့ကုံး(င်)ဇော့zတဲ့
☞ ခင်ဗျား ဘာအလုပ် လုပ်တာလဲ။
☞ Wǒ shì yí ge xuéshēng, nǐ ne?
☞ ဝေါ်ရှစ်h ယီကဲာ့ရွှယ်ရှဲင်းh(င်) နီနဲ
☞ ကျွန်တော် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ၊ ခင်ဗျားရော။
☞ Wǒ yě shì ge xuéshēng.
☞ ကျွန်တော်လည်း ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။
အလာပသလာပ ပွောဆိုတဲ့အခါ တဈယောကျအကွောငျးတဈယောကျ မေးမွနျးကွပုံလေးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ တားရောငျrလား နီရှဈh မကေောရဲငျrမား
☞ တဆိတျလောကျ၊ ခငျဗြားက အမရေိကနျလူမြိုးလား။
☞ နီဟှရှေ့ောh ယငျး(ငျ)ယှီမား
☞ ခငျဗြား အင်ျဂလိပျလို ပွောတတျလား။
☞ ယိတနျြးတနျြ တနျ့ရှဈh ရှောhတဲ့ပုဟောငျ
☞ နညျးနညျးပေါ့၊ ဒါပမေယျ့ ပွောတာ မကောငျးပါဘူး။
☞ နီဇိုကျzကြဲ့r တိုငျးလဲာ့တောကြိုလား
☞ ခငျဗြား ဒီမှာနတော ဘယျလောကျကွာပွီလဲ။
☞ နီရှဈhဇော့z ရှဲhမဲာ့ကုံး(ငျ)ဇော့zတဲ့
☞ ခငျဗြား ဘာအလုပျ လုပျတာလဲ။
☞ ဝျေါရှဈh ယီကဲာ့ရှယျရှဲငျးh(ငျ) နီနဲ
☞ ကြှနျတျော ကြောငျးသားတဈယောကျပါ၊ ခငျဗြားရော။
☞ ကြှနျတျောလညျး ကြောငျးသားတဈယောကျပါ။
8:58 PM C-Dialogue , Chinese
စတင်တွေ့ဆုံကြတဲ့အချိန်မှာ မဖြစ်မနေ ပြောဆိုကြရမယ့် အခြေခံအကျဆုံး စကားပြောပုံစံလေးတွေကို လေ့လာကြပါစို့။
☞ Nǐ hǎo!
☞ Nǐ hǎo ma?
☞ Wǒ hěn hǎo, nǐ ne?
☞ ဝေါ်ဟဲင်းဟောင် နီနဲ
☞ ကျွန်တော် နေကောင်းပါတယ်၊ ခင်ဗျားရော။
☞ Wǒ yě hěn hǎo. Nǐ huì shuō Yīngyǔ ma?
☞ ဝေါယဲဟဲင်းဟောင် နီဟွေ့ရှောhယင်း(င်)ယွီမား
☞ ကျွန်တော်လည်း နေကောင်းပါတယ်။ ခင်ဗျား အင်္ဂလိပ်စကား ပြောတတ်လား။
☞ Yì diǎn dian, nǐ shì Měiguórén ma?
☞ ယိတျန်းတျန် နီရှစ်h မေကောရဲင်rမား
☞ နည်းနည်းပါ၊ ခင်ဗျားက အမရိကန်လူမျိုးလား။
☞ Shì de.
☞ Nǐ lái zì nǎlǐ?
☞ နီလိုင်ဇစ်z နားလီ
☞ ခင်ဗျား ဘယ်ကလာတာလဲ။
☞ Wǒ lái zì Jiālìfúníyàzhōu.
☞ ဝေါ်လိုင်ဇစ်z ကျားလိဖူးfနီယာ့ကျိုးh
☞ ကျွန်တော် ကယ်လီဖိုးနီးယားက လာတာပါ။
☞ Jiàn dào nǐ hěn gāoxìng.
☞ ကျန့်တောက်နီ ဟဲင်ကောင်းရှင့်(င်)
☞ ခင်ဗျားကို တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။
☞ Wǒ yě hěn gāoxìng.
☞ ဝေါယဲ ဟဲင်ကောင်းရှင့်(င်)
☞ ကျွန်တော်လည်း ဝမ်းသာပါတယ်။
စတငျတှဆေုံ့ကွတဲ့အခြိနျမှာ မဖွဈမနေ ပွောဆိုကွရမယျ့ အခွခေံအကဆြုံး စကားပွောပုံစံလေးတှကေို လလေ့ာကွပါစို့။
☞ ဝျေါဟဲငျးဟောငျ နီနဲ
☞ ကြှနျတျော နကေောငျးပါတယျ၊ ခငျဗြားရော။
☞ ဝေါယဲဟဲငျးဟောငျ နီဟှရှေ့ောhယငျး(ငျ)ယှီမား
☞ ကြှနျတျောလညျး နကေောငျးပါတယျ။ ခငျဗြား အင်ျဂလိပျစကား ပွောတတျလား။
☞ ယိတနျြးတနျြ နီရှဈh မကေောရဲငျrမား
☞ နညျးနညျးပါ၊ ခငျဗြားက အမရိကနျလူမြိုးလား။
☞ နီလိုငျဇဈz နားလီ
☞ ခငျဗြား ဘယျကလာတာလဲ။
☞ ဝျေါလိုငျဇဈz ကြားလိဖူးfနီယာ့ကြိုးh
☞ ကြှနျတျော ကယျလီဖိုးနီးယားက လာတာပါ။
☞ ကနျြ့တောကျနီ ဟဲငျကောငျးရှငျ့(ငျ)
☞ ခငျဗြားကို တှရေ့တာ ဝမျးသာပါတယျ။
☞ ဝေါယဲ ဟဲငျကောငျးရှငျ့(ငျ)
☞ ကြှနျတျောလညျး ဝမျးသာပါတယျ။
8:54 PM C-Sentence , Chinese
အချိန်ကာလနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုဖော်ပြချင်တဲ့အခါ ထဲထဲဝင်ဝင် ပြောတတ်စေဖို့ ဒီလိုလေးတွေ လေ့လာထားပါ။
☞ Dōu liǎngdiǎn le.
☞ တိုး လျန်း(င်)တျန်လဲာ့
☞ နှစ်နာရီတောင် ထိုးပြီ။
☞ Hái bú dào liǎngdiǎn.
☞ ဟိုင်ပူတောက် လျန်း(င်)တျန်
☞ နှစ်နာရီ မထိုးသေးပါ။
☞ Kuài yào liǎngdiǎn le.
☞ ခွိုက်ယောက် လျန်း(င်)တျန်လဲာ့
☞ နှစ်နာရီ ထိုးတော့မယ်။
☞ Liǎngdiǎn zhěng le.
☞ နှစ်နာရီတိတိ ရှိပြီ။
☞ Dàgài shì liǎngdiǎn.
☞ တာ့ကိုက်ရှစ်h လျန်း(င်)တျန်
☞ နှစ်နာရီလောက် ရှိပြီ။
☞ Wǔhòu liǎngdiǎn le.
☞ ဝူဟို့ လျန်း(င်)တျန်လဲာ့
☞ မွန်းလွဲနှစ်နာရီ ရှိပြီ။
☞ Zǎochén liǎngdiǎn le
☞ ဇောင်zချဲင်h လျန်း(င်)တျန်လဲာ့
☞ မနက်နှစ်နာရီ ထိုးပြီ။
☞ Hái yǒu shí fēnzhōng.
☞ ဟိုင်းယို ရှီhဖဲင်းfကျုံးh(င်)
☞ ဆယ်မိနစ် လိုသေးတယ်။
☞ Hái yǒu bàn xiǎoshí.
☞ ဟိုင်းယို ပန့်ရှောင်ရှီh
☞ နာရီဝက် လိုသေးတယ်။
☞ Tiān hēi le.
☞ ထျန်း ဟေးလဲာ့
☞ Tiān yào hēi le.
☞ ထျန်း ယောက်ဟေးလဲာ့
☞ Tiān jīhū hēi le.
☞ ထျန်း ကျီးဟူးဟေးလဲာ့
☞ Tiān wánquán hēi le.
☞ ထျန်း ဝမ်းချွမ်ဟေးလဲာ့
☞ Tiān dà liàng le.
☞ ထျန်း တာ့လျန့်(င်)လဲာ့
☞ Dào zhèngwǔ le.
☞ တောက် ကျဲင့်h(င်)ဝူလဲာ့
☞ Tàiyáng piān xié le.
☞ ထိုက်ယန်(င်) ဖြန်းရှယ်လဲာ့
☞ Tàiyáng chū lái le.
☞ ထိုက်ယန်(င်) ချူးhလိုင်လဲာ့
☞ Tàiyáng luò shān le.
☞ ထိုက်ယန်(င်) လော့ရှန်းhလဲာ့
အခြိနျကာလနဲ့ ပတျသကျပွီး ပွောဆိုဖျောပွခငျြတဲ့အခါ ထဲထဲဝငျဝငျ ပွောတတျစဖေို့ ဒီလိုလေးတှေ လလေ့ာထားပါ။
☞ တိုး လနျြး(ငျ)တနျြလဲာ့
☞ နှဈနာရီတောငျ ထိုးပွီ။
☞ ဟိုငျပူတောကျ လနျြး(ငျ)တနျြ
☞ နှဈနာရီ မထိုးသေးပါ။
☞ ခှိုကျယောကျ လနျြး(ငျ)တနျြလဲာ့
☞ နှဈနာရီ ထိုးတော့မယျ။
☞ နှဈနာရီတိတိ ရှိပွီ။
☞ တာ့ကိုကျရှဈh လနျြး(ငျ)တနျြ
☞ နှဈနာရီလောကျ ရှိပွီ။
☞ ဝူဟို့ လနျြး(ငျ)တနျြလဲာ့
☞ မှနျးလှဲနှဈနာရီ ရှိပွီ။
☞ ဇောငျzခြဲငျh လနျြး(ငျ)တနျြလဲာ့
☞ မနကျနှဈနာရီ ထိုးပွီ။
☞ ဟိုငျးယို ရှီhဖဲငျးfကြုံးh(ငျ)
☞ ဆယျမိနဈ လိုသေးတယျ။
☞ ဟိုငျးယို ပနျ့ရှောငျရှီh
☞ နာရီဝကျ လိုသေးတယျ။
☞ ထနျြး ဟေးလဲာ့
☞ ထနျြး ယောကျဟေးလဲာ့
☞ ထနျြး ကြီးဟူးဟေးလဲာ့
☞ ထနျြး ဝမျးခြှမျဟေးလဲာ့
☞ ထနျြး တာ့လနျြ့(ငျ)လဲာ့
☞ တောကျ ကြဲငျ့h(ငျ)ဝူလဲာ့
☞ ထိုကျယနျ(ငျ) ဖွနျးရှယျလဲာ့
☞ ထိုကျယနျ(ငျ) ခြူးhလိုငျလဲာ့
☞ ထိုကျယနျ(ငျ) လော့ရှနျးhလဲာ့
8:14 PM C-Word , Chinese
ဒီခေတ်ထဲမှာတော့ လူတိုင်း ဖုန်းကိုယ်စီရှိကြသလို၊ အားလုံးကလည်း အွန်လိုင်းနဲ့ မစိမ်းကြပါဘူး။
〔ပေါ်ခဲ့〕blog / ဘလော့ဂ်
脸书帐号 liǎnshū zhànghào
〔လျန်ရှူးh ကျန့်h(င်)ဟောက်〕Facebook account
输入密码 shūrù mìmǎ
〔ရှူးhရုr မိမာ〕password ရိုက်ထည့်သည်
设置密码 shèzhì mìmǎ
〔ရှဲ့hကျိh မိမာ〕password setting ချိန်သည်
加朋友 jiā péngyǒu
〔ကျား ဖဲင်း(င်)ယို〕friend add သည်
〔ဇိုက်zရှန့်〕be online / လိုင်းပေါ်တွင်ရှိသည်
〔ဝမ်း(င်)ယို〕net friend / အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေ
〔တဲင်း(င်)ရုr〕log in ဝင်သည်
〔တဲင်း(င်)ချူးh〕log out ထွက်သည်
〔ဝမ်း(င်)ကျီh〕web address, URL
〔စိုးစော်〕search / ရှာဖွေသည်
晒照片 shài zhàopiàn
〔ဖဲင်fစီး〕fan / ဖန်
发短信 fā duǎnxìn
不关注 bù guānzhù
刷手机 shuā shǒujī
ဒီခတျေထဲမှာတော့ လူတိုငျး ဖုနျးကိုယျစီရှိကွသလို၊ အားလုံးကလညျး အှနျလိုငျးနဲ့ မစိမျးကွပါဘူး။
〔ပျေါခဲ့〕blog / ဘလော့ဂျ
〔လနျြရှူးh ကနျြ့h(ငျ)ဟောကျ〕Facebook account
〔ရှူးhရုr မိမာ〕password ရိုကျထညျ့သညျ
〔ရှဲ့hကြိh မိမာ〕password setting ခြိနျသညျ
〔ကြား ဖဲငျး(ငျ)ယို〕friend add သညျ
〔ဇိုကျzရှနျ့〕be online / လိုငျးပျေါတှငျရှိသညျ
〔ဝမျး(ငျ)ယို〕net friend / အှနျလိုငျးမိတျဆှေ
〔တဲငျး(ငျ)ရုr〕log in ဝငျသညျ
〔တဲငျး(ငျ)ခြူးh〕log out ထှကျသညျ
〔ဝမျး(ငျ)ကြီh〕web address, URL
〔စိုးစျော〕search / ရှာဖှသေညျ
〔ဖဲငျfစီး〕fan / ဖနျ
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၆၆ ။
7:59 PM C-Sentence , Chinese
ဒီနေ့လေ့လာကြရမယ့် တရုတ်စကားပြောဝါကျတိုလေးများ ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးများတဲ့ စကားစုလေးတွေမို့လို့ လေ့လာထားသင့်ပါကြောင်း။
Xiǎng qǐ le, yào gěi nǐ mǎi yí ge.
ရှန်း(င်)ချီလဲာ့ ယောက်ကေးနီ မိုင်ယီကဲာ့
နင့်ကို တစ်ခုလောက်ဝယ်ပေးဖို့ စိတ်ကူးရလာလို့။
Wàibiān hěn lěng.
Yào wǒ bāngmáng ma?
Nǐ jīntiān zěnme le?
နီ ကျင်းထျန်း ဇဲင်zမဲာ့လဲာ့
မင်း ဒီနေ့ ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ။
Nǐ xiān huí jiā ba.
မင်း အရင် အိမ်ပြန်လိုက်။
Wǒmen tán yì tán ba.
Bù guān nǐ de shì.
Nǐ háishì chū qù le ma?
နီ ဟိုင်ရှစ်h ချူးhချွိလဲာ့မား
Bú yào shuō huǎng le.
Wǒ hái méi sǐ!
Wǒ zhǐ wèn nǐ yí ge.
ငါ တစ်ခုပဲ မေးချင်တယ်။
Hěn jǐu méi chī le.
ဝါကတြို စုစညျးမှု - ၆၆ ။
ဒီနလေ့လေ့ာကွရမယျ့ တရုတျစကားပွောဝါကတြိုလေးမြား ဖွဈပါတယျ။ အသုံးမြားတဲ့ စကားစုလေးတှမေို့လို့ လလေ့ာထားသငျ့ပါကွောငျး။
ရှနျး(ငျ)ခြီလဲာ့ ယောကျကေးနီ မိုငျယီကဲာ့
နငျ့ကို တဈခုလောကျဝယျပေးဖို့ စိတျကူးရလာလို့။
နီ ကငျြးထနျြး ဇဲငျzမဲာ့လဲာ့
မငျး ဒီနေ့ ဘယျလိုဖွဈနတောလဲ။
မငျး အရငျ အိမျပွနျလိုကျ။
နီ ဟိုငျရှဈh ခြူးhခြှိလဲာ့မား
ငါ တဈခုပဲ မေးခငျြတယျ။
7:49 PM C-Dialogue , Chinese
ငွေလဲတဲ့အခါမှာ တရုတ်လို ပြောတတ်ဆိုတတ်အောင် ဒီနမူနာ စကားပြောပုံစံလေးကို လေ့ကျင့်ထားပါနော်။
☞ Láojià, wǒ xiǎng bǎ měiyuán huàn chéng rénmínbì.
☞ လောင်ကျာ့ ဝေါရှန်း(င်)ပါမေယွမ် ဟွမ့်ချဲင်h(င်) ရဲင်းrမျင်ပိ
☞ တဆိတ်လောက်၊ ကျွန်တော် ဒေါ်လာနဲ့ တရုတ်ငွေ လဲချင်လို့ပါ။
☞ Nín yào huàn duōshǎo?
☞ နင်ယောက်ဟွမ့် တောရှောင်h
☞ ခင်ဗျား ဘယ်လောက်လဲမှာလဲ။
☞ Wǔ bǎi měiyuán.
☞ ဒေါ်လာ ၅၀၀ ပါ။
☞ Qǐng nín xiān tián yì zhāng duìhuàndān.
☞ ချင်(င်)နင်ရှန်းထျန် ယိကျန်းh(င်)တွေ့ဟွမ့်တန်း
☞ ကျေးဇူးပြုပြီး ငွေလဲလွှာတစ်စောင် အရင်ဖြည့်ပါ။
☞ Jīntiān měiyuán hé rénmínbì de bǐjià shì duōshǎo?
☞ ကျင်းထျန်း မေယွမ်ဟဲယ် ရဲင်းrမျင်ပိတဲ့ ပီကျာ့ရှစ်h တောရှောင်h
☞ ဒီနေ့ ဒေါ်လာနဲ့ တရုတ်ငွေလဲနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ။
☞ Bǐjià shì yī bǐ bā diǎn liù sān.
☞ ပီကျာ့ရှစ်h ယီးပီ ပါးတျန်လျို့စန်း
☞ ငွေလဲနှုန်းက တစ်ဒေါ်လာကို ၈.၆၃ယွမ်ပါ။
☞ Wǒ tián hǎo duìhuàndān le.
☞ ဝေါ်ထျန်းဟောင် တွေ့ဟွမ့်တန်းလဲာ့
☞ ကျွန်တော် ငွေလဲလွှာ ဖြည့်ပြီးပါပြီ။
☞ Qǐng shāo děng. Zhè shì nín de qián.
☞ ချင်(င်)ရှောင်းhတဲင်(င်) ကျဲ့hရှစ်h နင်တဲ့ချန်
☞ ခဏစောင့်ပါနော်။ ဒါက ခင်ဗျားရဲ့ငွေပါ။
☞ Xiè xie.
ငှလေဲတဲ့အခါမှာ တရုတျလို ပွောတတျဆိုတတျအောငျ ဒီနမူနာ စကားပွောပုံစံလေးကို လကေ့ငျြ့ထားပါနျော။
☞ လောငျကြာ့ ဝေါရှနျး(ငျ)ပါမယှေမျ ဟှမျ့ခြဲငျh(ငျ) ရဲငျးrမငျြပိ
☞ တဆိတျလောကျ၊ ကြှနျတျော ဒျေါလာနဲ့ တရုတျငှေ လဲခငျြလို့ပါ။
☞ နငျယောကျဟှမျ့ တောရှောငျh
☞ ခငျဗြား ဘယျလောကျလဲမှာလဲ။
☞ ဒျေါလာ ၅၀၀ ပါ။
☞ ခငျြ(ငျ)နငျရှနျးထနျြ ယိကနျြးh(ငျ)တှဟှေ့မျ့တနျး
☞ ကြေးဇူးပွုပွီး ငှလေဲလှာတဈစောငျ အရငျဖွညျ့ပါ။
☞ ကငျြးထနျြး မယှေမျဟဲယျ ရဲငျးrမငျြပိတဲ့ ပီကြာ့ရှဈh တောရှောငျh
☞ ဒီနေ့ ဒျေါလာနဲ့ တရုတျငှလေဲနှုနျးက ဘယျလောကျလဲ။
☞ ပီကြာ့ရှဈh ယီးပီ ပါးတနျြလြို့စနျး
☞ ငှလေဲနှုနျးက တဈဒျေါလာကို ၈.၆၃ယှမျပါ။
☞ ဝျေါထနျြးဟောငျ တှဟှေ့မျ့တနျးလဲာ့
☞ ကြှနျတျော ငှလေဲလှာ ဖွညျ့ပွီးပါပွီ။
☞ ခငျြ(ငျ)ရှောငျးhတဲငျ(ငျ) ကြဲ့hရှဈh နငျတဲ့ခနျြ
☞ ခဏစောငျ့ပါနျော။ ဒါက ခငျဗြားရဲ့ငှပေါ။
Pinyin "d" သည် "တ" လား၊ "သ" လား။
10:10 PM C-Pinyin , Chinese
မည်သည့်ဘာသာစကားကို ပြောဆိုစေကာမူ အသံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် အသံဖြစ်အင်္ဂါများဖြစ်သော လည်ချောင်း၊ အာစောက်၊ လျှာထိပ်၊ သွား၊ နှုတ်ခမ်း၊ နှာခေါင်း စသည်တို့ကို အသုံးပြုရပါသည်။ ထို့ကြောင့် မည်သူမဆို (၄င်းအသံဖြစ်အင်္ဂါများ ချို့ယွင်းမနေပါက) မည်သည့်ဘာသာစကား၏ အသံထွက်ကိုမဆို စနစ်တကျ လေ့လာခြင်းဖြင့် တိကျစွာ အသံထွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
သို့သော် ဘာသာစကားတစ်ခုနှင့်တစ်ခု အသံဖြစ်တည်ပုံ မတူညီကြသည်ကိုလည်း သတိပြုသင့်ပေသည်။ မြန်မာစကားနှင့် တရုတ်စကား၏ အသံဖြစ်ပေါ်ပုံများကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်ပါက မြန်မာစကား၏ အသံများမှာ လည်ချောင်းမှ အဓိကဖြစ်ပေါ်လာပြီး၊ တရုတ်စကား၏ အသံများမှာ နှုတ်ခမ်းဖျားမှ အဓိကဖြစ်ပေါ်လာကြသည်။ ထို့ကြောင့် သေချာစွာ ရွတ်ဆိုကြည့်ပါက မြန်မာအသံများမှာ အနည်းငယ် လေး(ပြင်း)သယောင်ရှိပြီး၊ တရုတ်အသံများမှာ အနည်းငယ် ပျော့(ပေါ့)သယောင် ရှိကြပါသည်။
ဥပမာပြရလျှင် တရုတ် pinyin ရှိbp mfစသည့် အသံထွက်မျိုးသည် မြန်မာအသံ "ပေါ်ပေါက်၊ ဖော်ထုတ်၊ မော်ကြွား" စသည်များမှ " ပေါ်၊ ဖော်၊ မော်" အသံထွက်မျိုးနှင့် လုံးဝမတူညီပါ။
ဆိုလိုသည်မှာ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အသံထွက်စနစ်အတွက် စတင်သိထားသင့်သည်မှာ မည်သည့်အသံသည် မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမှ ထွက်ရှိလာသည်ကို ဦးစွာလေ့လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာဗေဒ (Linguistics) နည်းဖြင့် အသံဖြစ်အင်္ဂါများ၏ အရေးပါပုံကို စတင်လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
ဘာသာစကားအများစုတွင် အသံအုပ်စုတူရာများကို group တစ်ခု အဖြစ်ထားလေ့ရှိပါသည်။ ယေဘုယျသုံးသပ်ကြည့်ပါက မြန်မာဘာသာတွင်-
က ခ ဂ ဃ င / ဟ (လည်ချောင်းအရပ်- ကဏ္ဌဌာန်)
စ ဆ ဇ ဈ ည / ယ (အာစောက်အရပ်- တာလုဌာန်)
တ ထ ဒ ဓ န / လ သ (သွားအရပ်- ဒန္တဌာန်)
ပ ဖ ဗ ဘ မ / ဝ (နှုတ်ခမ်းအရပ်- သြဋ္ဌဌာန်)
စသည်ဖြင့် အသံထွက် ရွတ်ဖတ်ပုံတူရာများကို စုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
zh ch sh r စသည်ဖြင့် အသံဖြစ်တည်မှု တူရာများကို အုပ်စုခွဲကာ စုစည်းထားပါသည်။
မြန်မာဘာသာရှိ " ပ ဖ ဗ ဘ မ " သည် နှုတ်ခမ်းမှ အသံဖြစ်တည်ကြသကဲ့သို့၊ တရုတ်ဘာသာရှိ "bp mf" သည်လည်း နှုတ်ခမ်း၌ပင် အသံဖြစ်တည်ကြပါသည်။ သို့သော် မြန်မာအသံနှင့် တရုတ်အသံတို့မှာ ရွတ်ဖတ်သောအခါ နှုတ်ခမ်းအနေအထား ကွာခြားသွားပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ မြန်မာအသံ "ပေါ်ပေါက်၊ ဖော်ထုတ်၊ မော်ကြွား" စသည်များမှ " ပေါ်၊ ဖော်၊ မော်" ကို ရွတ်ဖတ်ကြည့်ပါက " ပ ဖ မ " သည် နှုတ်ခမ်းအရပ်၌ ဖြစ်တည်သော ဗျည်းသံဖြစ်သဖြင့် နှုတ်ခမ်းကို ရှေ့သို့အနည်းငယ်သာ စူထုတ်ရပြီး၊ "ေ-ာ် " သရသည် လည်ချောင်း၌ ဖြစ်တည်သောကြောင့် နှုတ်ခမ်း + လည်ချောင်း (ကဏ္ဌသြဋ္ဌဌာန်) ဖြင့် ရွတ်ဆိုရပါသည်။
တရုတ်ဘာသာရှိbp mfမှာမူ နှုတ်ခမ်းကို ရှေ့သို့ သိသိသာသာစူထုတ်ထားရပြီး၊ ရှေ့နှာသံ (front nasal) ကို ထည့်သွင်းရွတ်ဆိုရပါသည်။
ဒုတိယတစ်ခုကို ဆက်လက် လေ့လာကြည့်ပါ။ မြန်မာဘာသာရှိ " တ ထ ဒ ဓ န / လ သ " သည် သွားမှ အသံဖြစ်တည်ကြသကဲ့သို့၊ တရုတ်ဘာသာရှိ "dt n l " သည်လည်း သွား၌ပင် အသံဖြစ်တည်ကြပါသည်။
မြန်မာဘာသာရှိ " တ ထ ဒ ဓ န လ " မှာ အသံပုံစံအုပ်စုတစ်ခုထဲတွင် ရှိပြီး "သ" မှာ ၄င်းတို့နှင့် မတူထူးခြားစွာ ရွတ်ဆိုရပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ " တ ထ ဒ ဓ န လ " သံကို ရွတ်ဖတ်ရာ၌ လျှာဖျားကို အပေါ်သွားရင်းတွင် ထိထားပြီးနောက် လျှာကို နောက်ဆုတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် အသံထွက်ပေါ်လာပါသည်။ သို့သော် "သ" သံမှာမူ သွားနှစ်ချောင်းကြားတွင် လျှာကို ကိုက်ထားပြီး ပါးစပ်ဟလိုက်မှသာ အသံထွက်ပေါ်ပါသည်။
တရုတ်ဘာသာရှိdt n l အသံများကို ရွတ်ဖတ်ရာ၌လည်း လျှာဖျားမှာ အပေါ်သွားရင်းကို ထိထားပြီးနောက် လျှာကို နောက်ဆုတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် အသံထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တရုတ်ဘာသာရှိ အသံအားလုံးတွင် လျှာကိုက်ပြီး ရွတ်ဆိုရသောအသံ (咬舌音) လုံးဝမရှိပါ။
ဆိုလိုသည်မှာ "တ" သံသည် အပေါ်သွားခြေကို လျှာဖျားဖြင့်ထိဆိုရသော အသံဖြစ်ပြီး၊ "သ" သံသည် လျှာကို သွားဖြင့်ကိုက်ဆိုရသော အသံဖြစ်ပါသည်။ တရုတ်ဘာသာရှိ "d" အသံကို ရွတ်ဖတ်ကြည့်ပါက အပေါ်သွားခြေကို လျှာဖျားဖြင့်ထိပြီး ရွတ်ဆိုရပါသည်။ လျှာကို သွားနှစ်ချောင်းကြားတွင် ကိုက်ကာ ရွတ်ဆိုရခြင်း မဟုတ်သဖြင့် "d" အသံကို "တ" ဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
မိမိဘာသာလည်း လက်တွေ့ရွတ်ဆိုကြည့်နိုင်ပါသည်။bp mfကို ရွတ်ဖတ်သောအခါ လျှာဖျားဖြင့် အပေါ်သွားခြေကို ထိပြီး ရွတ်ဖတ်သလား သို့မဟုတ် လျှာကို သွားဖြင့်ကိုက်ကာ ရွတ်ဖတ်ပါသလားဆိုသည်ကို သတိပြုပါ။ ထို့ကြောင့် မိမိနားထဲတွင် ထင်ယောင်ထင်မှား ကြားကာ မှတ်သားထားသော အသံများထက် အသံဖြစ်အင်္ဂါများမှ ထွက်ပေါ်လာသော အသံသဘောများကိုသာ နားလည်သဘောပေါက်အောင် လေ့ကျင့်ရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့် မိမိ၏ အသံများမှာ ပိုပိုပီသမှန်ကန်လာပါလိမ့်မည်။
မြန်မာဘာသာတွင် ဃောသသံ၊ အဃောသသံ (သံပြင်း 浊音 နှင့် သံပျော့ 清音) ဟူ၍ ရှိပါသေးသည်။ ၄င်းအသံနှစ်မျိုးသည် ရွတ်ဆိုပုံ တူညီပြီး လေသံပျော့ခြင်း၊ ပြင်းခြင်းသာ ကွာခြားပါသည်။ မြန်မာစကားရှိ
က နှင့် ဂ ဃ
စ နှင့် ဇ ဈ
တ နှင့် ဒ ဓ
ပ နှင့် ဗ ဘ .....တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
တရုတ်ဘာသာတွင် သံပျော့သာရှိပြီး၊ သံပြင်းမရှိပါ။ [ စကားချပ် - မိမိကိုယ်တိုင် တရုတ်လူမျိုးများကို မြန်မာစာသင်ပေးသောအခါ သူတို့ဆိုရခက်သော အသံများမှာ " ဂ င ည ဒ ဗ သ " စသည့် အသံခြောက်မျိုးပင် ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့သိရှိလိုပါက တရုတ်လူမျိုးများကို ၄င်းအသံများကို ရွတ်ဆိုခိုင်းကြည့်နိုင်ပါသည်။ ]
တရုတ်အသံနှင့် မြန်မာအသံများကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက-
g သည် မြန်မာတွင် "ဂ" သံ ဖြစ်ပြီး၊ တရုတ်တွင် "ဂ" သံ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် "ဂ" ၏ သံပျော့ဖြစ်သော "က" သံကို အစားထိုးသည်။
g ☞ က ⇔ ဂ ဃ ( "ဂ" ၏ သံပျော့ "က" )
b သည် မြန်မာတွင် "ဗ" သံ ဖြစ်ပြီး၊ တရုတ်တွင် "ဗ" သံ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် "ဗ" ၏ သံပျော့ဖြစ်သော "ပ" သံကို အစားထိုးသည်။
b ☞ ပ ⇔ ဗ ဘ ( "ဗ" ၏ သံပျော့ "ပ" )
d သည် မြန်မာတွင် "ဒ" သံ ဖြစ်ပြီး၊ တရုတ်တွင် "ဒ" သံ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် "ဒ" ၏ သံပျော့ဖြစ်သော "တ" သံကို အစားထိုးသည်။
d ☞ တ ⇔ ဒ ဓ ( "ဒ" ၏ သံပျော့ "တ" )
တရုတ်တွင် "သ" သံ မရှိကြောင်းကို ယုတ္တိကျကျ ထောက်ပြရပါက မြန်မာစကား သင်ယူနေသော တရုတ်များနှင့် စကားပြောကြည့်ပါ။
"သူ မသိဘူး" ကို "တူ မတိဘူး" ဟုပြောပါလိမ့်မည်။
ပို၍ သေချာစေလိုပါက "သေသောသူ သန်းသန်းသည် သုဿာန်သို့ သက်သက်သာသာသွားသည်" ကို တရုတ်တစ်ယောက်ကို ဆိုခိုင်းကြည့်ပါ။ "တေတောတူ တန်းတန်းတီ တုတ်တန်တို့ တက်တက်တာတာ တွားတီ" ဟူ၍ "တဝမ်းပူ" သံများသာ ထွက်လာပါလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တရုတ်တွင် "သ" သံ မရှိသဖြင့် စကားမပီခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ပြောရလျှင် အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်များမှာ "မန်ဒရင်း" ဟုခေါ်သော 普通话 တွင်သာ "သ" သံ မရှိကြောင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပြီး၊ အခြားအိမ်စကားများ၊ တိုင်းရင်းသားစကားများ၊ ဖူကျန့်စကား၊ ကွမ်တုံးစကား၊ ဟက်ကာစကားများတွင် "သ" သံ ရှိခြင်း၊ မရှိခြင်းကို မဆိုလိုပါ။
ထို့အတူ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ရှင်းလင်းချက်များမှာ Admin ၏ သုံးသပ်ချက်များသာဖြစ်၍ လက်ခံခြင်း၊ လက်မခံခြင်းများမှာ စာရှုသူများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သာဖြစ်ပြီး မိမိ ယုံကြည်သလို ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါသည်။
Pinyin "d" သညျ "တ" လား၊ "သ" လား။
မညျသညျ့ဘာသာစကားကို ပွောဆိုစကောမူ အသံတဈခုဖွဈပျေါလာစရေနျအတှကျ အသံဖွဈအင်ျဂါမြားဖွဈသော လညျခြောငျး၊ အာစောကျ၊ လြှာထိပျ၊ သှား၊ နှုတျခမျး၊ နှာခေါငျး စသညျတို့ကို အသုံးပွုရပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ မညျသူမဆို (၎င်းငျးအသံဖွဈအင်ျဂါမြား ခြို့ယှငျးမနပေါက) မညျသညျ့ဘာသာစကား၏ အသံထှကျကိုမဆို စနဈတကြ လလေ့ာခွငျးဖွငျ့ တိကစြှာ အသံထှကျနိုငျပါလိမျ့မညျ။
သို့သျော ဘာသာစကားတဈခုနှငျ့တဈခု အသံဖွဈတညျပုံ မတူညီကွသညျကိုလညျး သတိပွုသငျ့ပသေညျ။ မွနျမာစကားနှငျ့ တရုတျစကား၏ အသံဖွဈပျေါပုံမြားကို နှိုငျးယှဉျလလေ့ာကွညျ့ပါက မွနျမာစကား၏ အသံမြားမှာ လညျခြောငျးမှ အဓိကဖွဈပျေါလာပွီး၊ တရုတျစကား၏ အသံမြားမှာ နှုတျခမျးဖြားမှ အဓိကဖွဈပျေါလာကွသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သခြောစှာ ရှတျဆိုကွညျ့ပါက မွနျမာအသံမြားမှာ အနညျးငယျ လေး(ပွငျး)သယောငျရှိပွီး၊ တရုတျအသံမြားမှာ အနညျးငယျ ပြော့(ပေါ့)သယောငျ ရှိကွပါသညျ။
ဥပမာပွရလြှငျ တရုတျ pinyin ရှိbp mfစသညျ့ အသံထှကျမြိုးသညျ မွနျမာအသံ "ပျေါပေါကျ၊ ဖျောထုတျ၊ မျောကွှား" စသညျမြားမှ " ပျေါ၊ ဖျော၊ မျော" အသံထှကျမြိုးနှငျ့ လုံးဝမတူညီပါ။
ဆိုလိုသညျမှာ အထကျတှငျ ဖျောပွခဲ့သညျ့အတိုငျး အသံထှကျစနဈအတှကျ စတငျသိထားသငျ့သညျမှာ မညျသညျ့အသံသညျ မညျသညျ့အစိတျအပိုငျးမှ ထှကျရှိလာသညျကို ဦးစှာလလေ့ာရမညျဖွဈပါသညျ။
ဘာသာဗဒေ (Linguistics) နညျးဖွငျ့ အသံဖွဈအင်ျဂါမြား၏ အရေးပါပုံကို စတငျလလေ့ာကွညျ့ကွပါစို့။
ဘာသာစကားအမြားစုတှငျ အသံအုပျစုတူရာမြားကို group တဈခု အဖွဈထားလရှေိ့ပါသညျ။ ယဘေုယသြုံးသပျကွညျ့ပါက မွနျမာဘာသာတှငျ-
က ခ ဂ ဃ င / ဟ (လညျခြောငျးအရပျ- ကဏ်ဌဌာနျ)
စ ဆ ဇ ဈ ည / ယ (အာစောကျအရပျ- တာလုဌာနျ)
တ ထ ဒ ဓ န / လ သ (သှားအရပျ- ဒန်တဌာနျ)
ပ ဖ ဗ ဘ မ / ဝ (နှုတျခမျးအရပျ- သွဋ်ဌဌာနျ)
စသညျဖွငျ့ အသံထှကျ ရှတျဖတျပုံတူရာမြားကို စုထားခွငျး ဖွဈပါသညျ။
zh ch sh r စသညျဖွငျ့ အသံဖွဈတညျမှု တူရာမြားကို အုပျစုခှဲကာ စုစညျးထားပါသညျ။
မွနျမာဘာသာရှိ " ပ ဖ ဗ ဘ မ " သညျ နှုတျခမျးမှ အသံဖွဈတညျကွသကဲ့သို့၊ တရုတျဘာသာရှိ "bp mf" သညျလညျး နှုတျခမျး၌ပငျ အသံဖွဈတညျကွပါသညျ။ သို့သျော မွနျမာအသံနှငျ့ တရုတျအသံတို့မှာ ရှတျဖတျသောအခါ နှုတျခမျးအနအေထား ကှာခွားသှားပါသညျ။
ဆိုလိုသညျမှာ မွနျမာအသံ "ပျေါပေါကျ၊ ဖျောထုတျ၊ မျောကွှား" စသညျမြားမှ " ပျေါ၊ ဖျော၊ မျော" ကို ရှတျဖတျကွညျ့ပါက " ပ ဖ မ " သညျ နှုတျခမျးအရပျ၌ ဖွဈတညျသော ဗညျြးသံဖွဈသဖွငျ့ နှုတျခမျးကို ရှသေို့အနညျးငယျသာ စူထုတျရပွီး၊ "ေ-ျာ " သရသညျ လညျခြောငျး၌ ဖွဈတညျသောကွောငျ့ နှုတျခမျး + လညျခြောငျး (ကဏ်ဌသွဋ်ဌဌာနျ) ဖွငျ့ ရှတျဆိုရပါသညျ။
တရုတျဘာသာရှိbp mfမှာမူ နှုတျခမျးကို ရှသေို့ သိသိသာသာစူထုတျထားရပွီး၊ ရှနှေ့ာသံ (front nasal) ကို ထညျ့သှငျးရှတျဆိုရပါသညျ။
ဒုတိယတဈခုကို ဆကျလကျ လလေ့ာကွညျ့ပါ။ မွနျမာဘာသာရှိ " တ ထ ဒ ဓ န / လ သ " သညျ သှားမှ အသံဖွဈတညျကွသကဲ့သို့၊ တရုတျဘာသာရှိ "dt n l " သညျလညျး သှား၌ပငျ အသံဖွဈတညျကွပါသညျ။
မွနျမာဘာသာရှိ " တ ထ ဒ ဓ န လ " မှာ အသံပုံစံအုပျစုတဈခုထဲတှငျ ရှိပွီး "သ" မှာ ၎င်းငျးတို့နှငျ့ မတူထူးခွားစှာ ရှတျဆိုရပါသညျ။ ဆိုလိုသညျမှာ " တ ထ ဒ ဓ န လ " သံကို ရှတျဖတျရာ၌ လြှာဖြားကို အပျေါသှားရငျးတှငျ ထိထားပွီးနောကျ လြှာကို နောကျဆုတျလိုကျခွငျးဖွငျ့ အသံထှကျပျေါလာပါသညျ။ သို့သျော "သ" သံမှာမူ သှားနှဈခြောငျးကွားတှငျ လြှာကို ကိုကျထားပွီး ပါးစပျဟလိုကျမှသာ အသံထှကျပျေါပါသညျ။
တရုတျဘာသာရှိdt n l အသံမြားကို ရှတျဖတျရာ၌လညျး လြှာဖြားမှာ အပျေါသှားရငျးကို ထိထားပွီးနောကျ လြှာကို နောကျဆုတျလိုကျခွငျးဖွငျ့ အသံထှကျပျေါလာခွငျးဖွဈပါသညျ။ တရုတျဘာသာရှိ အသံအားလုံးတှငျ လြှာကိုကျပွီး ရှတျဆိုရသောအသံ (咬舌音) လုံးဝမရှိပါ။
ဆိုလိုသညျမှာ "တ" သံသညျ အပျေါသှားခွကေို လြှာဖြားဖွငျ့ထိဆိုရသော အသံဖွဈပွီး၊ "သ" သံသညျ လြှာကို သှားဖွငျ့ကိုကျဆိုရသော အသံဖွဈပါသညျ။ တရုတျဘာသာရှိ "d" အသံကို ရှတျဖတျကွညျ့ပါက အပျေါသှားခွကေို လြှာဖြားဖွငျ့ထိပွီး ရှတျဆိုရပါသညျ။ လြှာကို သှားနှဈခြောငျးကွားတှငျ ကိုကျကာ ရှတျဆိုရခွငျး မဟုတျသဖွငျ့ "d" အသံကို "တ" ဟု သတျမှတျနိုငျပါသညျ။
မိမိဘာသာလညျး လကျတှရှေ့တျဆိုကွညျ့နိုငျပါသညျ။bp mfကို ရှတျဖတျသောအခါ လြှာဖြားဖွငျ့ အပျေါသှားခွကေို ထိပွီး ရှတျဖတျသလား သို့မဟုတျ လြှာကို သှားဖွငျ့ကိုကျကာ ရှတျဖတျပါသလားဆိုသညျကို သတိပွုပါ။ ထို့ကွောငျ့ မိမိနားထဲတှငျ ထငျယောငျထငျမှား ကွားကာ မှတျသားထားသော အသံမြားထကျ အသံဖွဈအင်ျဂါမြားမှ ထှကျပျေါလာသော အသံသဘောမြားကိုသာ နားလညျသဘောပေါကျအောငျ လကေ့ငျြ့ရှတျဆိုခွငျးဖွငျ့ မိမိ၏ အသံမြားမှာ ပိုပိုပီသမှနျကနျလာပါလိမျ့မညျ။
မွနျမာဘာသာတှငျ ဃောသသံ၊ အဃောသသံ (သံပွငျး 浊音 နှငျ့ သံပြော့ 清音) ဟူ၍ ရှိပါသေးသညျ။ ၎င်းငျးအသံနှဈမြိုးသညျ ရှတျဆိုပုံ တူညီပွီး လသေံပြော့ခွငျး၊ ပွငျးခွငျးသာ ကှာခွားပါသညျ။ မွနျမာစကားရှိ
က နှငျ့ ဂ ဃ
စ နှငျ့ ဇ ဈ
တ နှငျ့ ဒ ဓ
ပ နှငျ့ ဗ ဘ .....တို့ ဖွဈကွပါသညျ။
တရုတျဘာသာတှငျ သံပြော့သာရှိပွီး၊ သံပွငျးမရှိပါ။ [ စကားခပျြ - မိမိကိုယျတိုငျ တရုတျလူမြိုးမြားကို မွနျမာစာသငျပေးသောအခါ သူတို့ဆိုရခကျသော အသံမြားမှာ " ဂ င ည ဒ ဗ သ " စသညျ့ အသံခွောကျမြိုးပငျ ဖွဈပါသညျ။ လကျတှသေိ့ရှိလိုပါက တရုတျလူမြိုးမြားကို ၎င်းငျးအသံမြားကို ရှတျဆိုခိုငျးကွညျ့နိုငျပါသညျ။ ]
တရုတျအသံနှငျ့ မွနျမာအသံမြားကို နှိုငျးယှဉျကွညျ့ပါက-
g သညျ မွနျမာတှငျ "ဂ" သံ ဖွဈပွီး၊ တရုတျတှငျ "ဂ" သံ မရှိပါ။ ထို့ကွောငျ့ "ဂ" ၏ သံပြော့ဖွဈသော "က" သံကို အစားထိုးသညျ။
g ☞ က ⇔ ဂ ဃ ( "ဂ" ၏ သံပြော့ "က" )
b သညျ မွနျမာတှငျ "ဗ" သံ ဖွဈပွီး၊ တရုတျတှငျ "ဗ" သံ မရှိပါ။ ထို့ကွောငျ့ "ဗ" ၏ သံပြော့ဖွဈသော "ပ" သံကို အစားထိုးသညျ။
b ☞ ပ ⇔ ဗ ဘ ( "ဗ" ၏ သံပြော့ "ပ" )
d သညျ မွနျမာတှငျ "ဒ" သံ ဖွဈပွီး၊ တရုတျတှငျ "ဒ" သံ မရှိပါ။ ထို့ကွောငျ့ "ဒ" ၏ သံပြော့ဖွဈသော "တ" သံကို အစားထိုးသညျ။
d ☞ တ ⇔ ဒ ဓ ( "ဒ" ၏ သံပြော့ "တ" )
တရုတျတှငျ "သ" သံ မရှိကွောငျးကို ယုတ်တိကကြ ထောကျပွရပါက မွနျမာစကား သငျယူနသေော တရုတျမြားနှငျ့ စကားပွောကွညျ့ပါ။
"သူ မသိဘူး" ကို "တူ မတိဘူး" ဟုပွောပါလိမျ့မညျ။
ပို၍ သခြောစလေိုပါက "သသေောသူ သနျးသနျးသညျ သုဿာနျသို့ သကျသကျသာသာသှားသညျ" ကို တရုတျတဈယောကျကို ဆိုခိုငျးကွညျ့ပါ။ "တတေောတူ တနျးတနျးတီ တုတျတနျတို့ တကျတကျတာတာ တှားတီ" ဟူ၍ "တဝမျးပူ" သံမြားသာ ထှကျလာပါလိမျ့မညျ။ ဆိုလိုသညျမှာ တရုတျတှငျ "သ" သံ မရှိသဖွငျ့ စကားမပီခွငျးသာ ဖွဈပါသညျ။
နိဂုံးခြုပျအနဖွေငျ့ ပွောရလြှငျ အထကျတှငျ ဖျောပွခဲ့သညျမြားမှာ "မနျဒရငျး" ဟုချေါသော 普通话 တှငျသာ "သ" သံ မရှိကွောငျးကို ရှငျးလငျးတငျပွခွငျးသာဖွဈပွီး၊ အခွားအိမျစကားမြား၊ တိုငျးရငျးသားစကားမြား၊ ဖူကနျြ့စကား၊ ကှမျတုံးစကား၊ ဟကျကာစကားမြားတှငျ "သ" သံ ရှိခွငျး၊ မရှိခွငျးကို မဆိုလိုပါ။
ထို့အတူ အထကျတှငျ ဖျောပွခဲ့သော ရှငျးလငျးခကျြမြားမှာ Admin ၏ သုံးသပျခကျြမြားသာဖွဈ၍ လကျခံခွငျး၊ လကျမခံခွငျးမြားမှာ စာရှုသူမြား၏ ဆုံးဖွတျခကျြသာဖွဈပွီး မိမိ ယုံကွညျသလို ဆကျလကျလြှောကျလှမျးနိုငျပါသညျ။
သင် စမူစာသုပ် စားဖူးသလား။
သင့်နိုင်ငံမှာ ရာသီဥတု ဘယ်နှစ်မျိုးရှိသလဲ။
သင့်မှာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ရှိသလား။
တရုတ်စာလုံး အစိတ်အပိုင်း 部首 များ။
နေ - ဝါကျတိုလေးများ။
မိုးရာသီကို သင် ကြိုက်ပါသလား။
သင် ပီကင်းဘဲကင် စားဖူးပါသလား။
"只有" ဝေါဟာရ ရှင်းလင်းချက်။
"只好" ဝေါဟာရ ရှင်းလင်းချက်။
"人家" ဝေါဟာရ ရှင်းလင်းချက်။
သင်ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးက ဘယ်သူလဲ။
ဝါကျနောက်ဆက်ပစ္စည်း 呢 ne အသုံးပြုပုံ။
"完 wán ပြီးမြောက်သည်" ဝေါဟာရ ရှင်းလင်းချက်။